ကောငျးစခေငျြလို့ပါ – My Blog
ဒျေါစီစီလှိုငျ အိပျရာက ထပွီး ရခြေိုးခနျး ထဲကို ဝငျလိုကျတယျ ။ သှားတိုကျရငျး ဝတျထားတဲ့ ညဝတျ ဝတျရုံကို ဖွခြှေတျပဈလိုကျတယျ ။ တကိုယျလုံးကို မွငျနရေတဲ့ ကိုယျလုံးပျေါ မှနျကွီးထဲမှာ အဝတျမဲ့ နတေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို သသေခြောခြာ ကွညျ့လိုကျမိတယျ ။ နို့ကွီး နှဈလုံးက အိကနြေ ပမေယျ့ လုံးဝနျးနဆေဲဘဲ ။ နို့သီးခေါငျး နီနီလေးတှကေလညျး တပျမကျစရာ ကောငျးတုံးဘဲ ။ ကိုယျ့ကိုယျကို အမွဲ အရိပျတကွညျ့ကွညျ့နဲ့ နခေဲ့လို့ ဝမျးပငျြသား ကလညျး ခပျမို့မို့လေး ရှိနပေမေယျ့ ကွညျ့ လို့ ကောငျးဆဲဘဲ ။ ခါးက သိပျ မသေးတော့ပမေယျ့ တုတျတုတျကွီးလညျး မဖွဈသေး ။ တငျပါးကွီးတှကေတော့ စှငျ့ကား ထယျဝါနဆေဲဘဲ ။ ပေါငျကွားနရောက အမှေးတှကေ တျောတျော ထူနပွေီ ။ ရခြေိုးရငျး အမှေးတှကေို ကပျကွေးနဲ့ ပါးပဈလိုကျတယျ။ မကွာခငျ ထဈခြုံးကို တနရောရာမှာ လိုးခိုငျးတော့မယျ ။ ဒီအခါ သူ စောကျဖုတျယကျပေးမှာ သခြောတယျ ။
သူ စောကျဖုတျယကျရငျ အနံ့အသကျ ကောငျးစဖေို့ ဆပျပွာမှေးမှေးနဲ့ သသေခြောခြာ ဆေးကွောလိုကျတယျ ။ ထဈခြုံးနဲ့ ဘယျနရောမှာ သှား လိုးရမလဲ ခေါငျးထဲမှာ စဉျးစားနတေယျ ။ ခေါငျးထဲမှာ ပျေါလာတာက ဗိုလျတထောငျ ဖကျမှာ နတေဲ့ သူ့သူငယျခငျြး လေးလေးနှယျ ရဲ့ တိုကျခနျးလေး ပါ ။ လေးလေးနှယျက သဘောကောငျးတယျ ။ တယောကျထဲ နတေဲ့ အပြိုကွီး ။ စကားလညျးနညျး မိတျဆှလေညျး နညျးလို့ သူ့ကို အကူအညီ တောငျးရငျ ရမယျ လို့ တှေးမိတယျ ။ ပကျဂီဘမွငျ့ကတော့ အပေါငျးအသငျးမြား ပွီး အာခြောငျတတျလို့ စိတျမခဘြူး ။ လေးလေးနှယျကို ဖုနျးလှမျး ဆကျလိုကျတော့ လေးလေးနှယျက “ ရတာပေါ့ စီစီရယျ….အခြိနျမရှေးပါ..ဒါပမေယျ့ လေ..သူငယျခငျြးက ကိုယျ့အခနျးမှာ ဘာလုပျမလို့လဲ ဆိုတာလေးတော့ စပျစုပါရစေ…” လို့ ရယျပွီး မေးလာ တယျ ။
သူက “ ကိုယျ့အိမျက ခြာတိတျ တယောကျကို အင်ျဂလိပျစာ သငျပေးမလို့ပါ…” လို့ ဖွလေိုကျတယျ ။ လေးလေးနှယျက “ သငျ သူငယျခငျြး…ကိုယျဖိရငျဖိသာ အကောငျးဆုံး သငျပေးလိုကျပါ..မငျးလာရငျ ကိုယျ အပွငျ ထှကျပေးမယျ…ကိုယျလညျး တာမှအေိုးရှငျးမှာ ရှော့ပငျသှားစရာ ရှိလို့…” လို့ ပွောတယျ ။ အငျး…နရောတော့ အိုကသှေားပွီ …။ ရခြေိုးအပွီး ခါတိုငျးလို အကွာကွီး အလှထိုငျ ပွငျမနတေော့ဘဲ ခပျမွနျမွနျဘဲ အဝတျအစား ပှပှပါးပါးတှကေို ဆှဲ ဝတျလိုကျပွီး တိုကျပျေါက ဆငျးသှားလိုကျတယျ ။ တိုကျအရှေ့ အပေါကျဝတညျ့တညျ့မှာ ထဈခြုံး ကားရပျပွီး ကားဘေးမှာ ရပျစောငျ့နတောကို တှလေို့ကျရတယျ ။
အံမယျ..ဒီကောငျလေး..အဝတျအစား သနျ့သနျ့ နဲ့ ကွညျ့ကောငျးနတေယျ ။ ရမေိုးခြိုးထားပုံရတယျ ။ “ ထဈခြုံး …” “ ဗြာ..ဒျေါလေး …” “ဗိုလျတထောငျ ဖကျကို လိုကျပို့ကှာ..ဒျေါလေး သူငယျခငျြး အိမျကို….” “ ဟုတျကဲ့…ဒျေါလေး..” ဒျေါစီစီလှိုငျ မကွာခငျ ဖွဈလာတော့မှာတှကေို ကွိုတငျ စိတျကူးယဉျ စဉျးစား တှေးတောနရေငျး ရငျတှေ တအား ခုံလာသညျ ။ဒျေါစီစီလှိုငျ က ထဈခြုံးနဲ့ မကွာခငျ လိုးဖွဈတော့မယျ ဆိုတာကို စဉျးစားပွီး စိတျတှေ ဖေါကျပွနျ နိုးကွှနပေေ မယျ့ ထဈခြုံးကတော့ ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ အကွံအစညျကို မသိသေး ။
စောသေးလို့ ကားပိတျဆို့တာတှေ မဖွဈသေးဘူး ။ “ ထဈခြုံး…” “ ဗြာ..ဒျေါလေး …” “ မနကေ့ ဟမျဘာဂါ ကောငျးလား….” “ ဟုတျ..အရမျး ကောငျးတာဘဲ ဒျေါလေး..ဟီး…တခါမှ မစားဘူးသေးဘူး..ကြေးဇူးပါ ဒျေါလေး …” “ ဒီနေ့ မငျးကို အကောငျးစား တခု ထပျ ကြှေးအုံးမယျကှ..” “ ဟုတျ..ဒျေါလေး….” ဗိုလျတထောငျက ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ သူငယျခငျြး လေးလေးနှယျရဲ့အိမျကို ရောကျတော့ လေးလေးနှယျက အပွငျထှကျနဲ့ အဝတျအစားသဈတှနေဲ အဆငျသငျ့ စောငျ့နပွေီး…“ စီရေ..အေးအေးဆေးဆေး လှတျလှတျလပျလပျ စိတျတိုငျးကသြာ နကွေ…ပွနျရငျလညျး တံခါးသာ ဆှဲပိတျခဲ့လိုကျ…” လို့ ပွုံးစိစိနဲ့ ပွောလိုကျတဲ့အခါ ထဈခြုံးလညျးသကျသကျမွိုငျနဲ့ ရနျကငျးတိုကျက သူ့သူငယျခငျြး အိမျကို လိုကျသှားတာတဲ့အခါ ဖွဈပကျြတာနဲ့ တထပျတညျး တူနလေို့ ဒျေါစီစီလှိုငျ သူနဲ့ လိုးကွဖို့ စီစဉျထားတာကို ရိပျမိ သှားပါတော့တယျ ။
ကြေးဇူးရှငျ ဘကွီးမွိုငျရဲ့ ဇနီးမယား ဖွဈလို့ အိမျမှာ နတေဲ့အခြိနျ ဒျေါစီစီလှိုငျကို မပွဈမှား မိရအောငျ သတိထား ခဲ့တာ..။ အခုလညျး တဏှာထနျတဲ့လူတယောကျ ဖွဈပမေယျ့ ဒျေါစီစီလှိုငျကို တတျနိုငျရငျ မလုပျခငျြဘူး ။ သို့ပမေယျ့ ဒျေါစီစီလှိုငျက “ ထဈခြုံး….လိုကျခဲ့…” ဆိုပွီး အိပျခနျးထဲကို ချေါသှားတဲ့အခါ ထဈခြုံးရဲ့ စိတျတှေ ဘလောငျဆူ လှုပျရှားလာရပွီ ။ အိပျခနျးထဲကို သှားကွတဲ့အခါ သူက ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ အနောကျက လိုကျရတော့ စှငျ့ကားတဲ့ တငျပါးကွီးတှေ လှုပျတုနျတာကို မွငျရတာ သူ့စိတျတှေ ယိမျးယိုငျကုနျသညျ ။
သူတို့ နှဈယောကျထဲဘဲ ရှိတယျ ဆိုတဲ့ အသိကလညျး ထဈခြုံးရဲ့ စိတျတှကေို ဖေါကျပွားလာစသေညျ ။ အိပျခနျးထဲကို ရောကျတော့ ဒျေါစီစီလှိုငျက ထဈခြုံးဖကျကို လှညျ့လိုကျပွီး “ ထဈခြုံး….မငျးကို ဒျေါလေး ပွောပွ ခငျြတာတှေ ရှိတယျကှာ..ဒါကွောငျ့ မငျးကို ဒီကို ချေါလာတာ…” လို့ ပွောလိုကျတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျနဲ့ သူနဲ့ အရမျးကို နီးကပျနတေယျ ။ “ မအိုကျဘူးလားကှာ..မငျး အကငြ်္ီကို ခြှတျလိုကျပါလား…” လို့ လသေံလေးနဲ့ ပွောလိုကျလို့ ထဈခြုံးလညျး ဝတျထားတဲ့ စပို့ရှပျကို ခြှတျပဈလိုကျတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျက “ အငျး..မငျးလေးက တျောတျော ယောကျြား ပီသပါလား…” လို့ စစေ့စေ့ပျစပျ ကွညျ့ရငျး ပွောလိုကျပွီး ထဈခြုံးရဲ့ ရငျဘတျကို လကျနဲ့ ဖှဖှလေး ပှတျလိုကျတယျ ။ ထဈခြုံးလညျး ကွကျသီးတှေ ထပွီး ပေါငျကွားက လီးလညျး ငေါကျကနဲ ထလာရတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျက “ အောကျက ပုဆိုးကိုပါ ခြှတျလိုကျကှာ…” လို့ လသေံလေးနဲ့ ထပျ အမိနျ့ပေးတယျ ။
ထဈ ခြုံးလညျး ခကျြခငျြးဘဲ ပုဆိုးကို ခြှတျခပြဈလိုကျတယျ ။ အတှငျးခံဘောငျးဘီဘဲ သူ့တကိုယျလုံးမှာ ကနျြတော့ တယျ ။ ဖုဖေါငျး ငေါနတေဲ့ ပေါငျကွားက အရာကွီးကို သသေခြောခြာ စိုကျကွညျ့ပွီး “ မငျး မနကျက ရေ ခြိုးခဲ့သေးလား…” လို့ မေးပွနျလို့..“ ဟုတျ..ခြိုးပါတယျ ဒျေါလေး..” လို့ ထဈခြုံး ဖွတေယျ ။ “ မငျး အနျဒါဝဲ ကိုပါ ခြှတျလိုကျ…” လို့ ထပျပွောလို့ မဆိုငျးမတှ အမိနျ့ကို နာခံလိုကျတယျ ။ တကိုယျလုံး အဝတျမဲ့နပွေီ …။ ကိုယျလုံးတီးကွီး ရပျနတေဲ့ ထဈခြုံးကို ဒျေါစီစီလှိုငျ ခွဆေုံး ခေါငျးဆုံး ကွညျ့နပေုံက ကြှနျ ပိုငျရှငျခတျေက သူဌေးတှကေ ကြှနျဝယျတဲ့နရောမှာ သသေခြောခြာ စဈဆေး သုံးသပျနတေဲ့ ပုံလိုပါဘဲ ။ လီးတနျငေါငေါကွီးကို ကွညျ့ပွီး ဒျေါစီစီလှိုငျ တံတှေး မွိုခလြိုကျတယျ ။ ကောငျးလိုကျတဲ့ လီးကွီးပါလား …။
လငျဖွဈသူရဲ့ လီးတိုလေးနဲ့ တခွားစီဘဲ…အငျး..စောကျဖုတျထဲက တအား ယားနရေပွီ…..။ “ မငျးရဲ့ ဘကွီးမွိုငျက ခါးနာတဲ့ ဝဒေနာကွောငျ့ ဒျေါလေးကို ပဈထားတာ ကွာပွီကှ….ဒျေါလေးနဲ့ မအိပျတော့ဘူး …ဒျေါလေးလညျး ယောကျြား အပျေါကို သစ်စာမဖေါကျခငျြတာနဲ့ ကွိတျမှိတျပွီး နခေဲ့တာ ကွာပါပွီကှာ…အခုတော့ ဒျေါလေး မအောငျ့အညျးနိုငျတော့ဘူး…မငျး ဒျေါလေးကို ဆန်ဒဖွညျ့ပေးပါလားဟငျ..” ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ လကျတဖကျက ထဈခြုံးရဲ့ လီးတနျကွီးဆီကို ရောကျလာတယျ ။ ထဈခြုံးလညျး ဘာပွနျပွောရမှနျး မသိဘူး ။ ဘကွီးမွိုငျရဲ့ သမီးနှဈယောကျလုံးကို သူ လိုးခဲ့ပွီးပွီ ။ အခု သူ့ဇနီး ကို ထပျ လိုးရမယျ ဆိုရငျ သူ ကမျးကုနျနပွေီ ။ “ မသငျ့တျောဘူး ထငျတယျ ဒျေါလေးရယျ…ဘကွီးမွိုငျက ကနြေျာ့ရဲ့ ကြေးဇူးရှငျ တယောကျပါ…ဒျေါလေးကို ကနြေျာ့ အဒျေါအရငျး တယောကျလို သဘောထားခဲ့တာပါ….” ထဈခြုံးပွောနတေဲ့ အခြိနျ ဒျေါစီစီလှိုငျက သူ့လီးတနျကို ပှတျသပျနတေယျ ။
သညျ အထိအတှကွေ့ောငျ့ ထဈ ခြုံးရဲ့ သှေးသားတှေ ထကွှလာတယျ ။ လီးကွီးက မတျမတျထောငျလာတယျ ။ တောငျလာတယျ ။ “ ထဈခြုံး…ကူညီပါကှာ..မငျး ဒျေါလေးကို ကူညီစမျးပါ…..” ဒျေါစီစီလှိုငျက ထဈခြုံးရဲ့ လီးကို လကျတဖကျနဲ့ ဆုပျကိုငျ နောကျ လကျတဖကျနဲ့ ထဈခြုံးရဲ့ လကျကို ဆှဲ ပွီး ကုတငျဆီကို ချေါသှားတယျ ။ ထဈခြုံးလညျး သူ့လီးကို ဆုပျကိုငျခံထားရတာကွောငျ့ ကွကျသီးတှေ တဖနျြးဖနျြးထပွီး စိတျတှေ ကွှထနျလာ တယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျက ထဈခြုံးကို ကုတငျပျေါက မှယေ့ာထူထူကွီးပျေါကို တှနျးခလြိုကျတယျ ။ ပကျလကျကြ သှားတဲ့ ထဈခြုံးလညျး အဝတျအစားတှေ ခြှတျပဈနတေဲ့ ဒျေါစီစီလှိုငျကို ငေးကွညျ့နမေိတယျ ။
ဖွူဖှေးတောငျ့တငျးတဲ့ ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ ဝတျလဈစလဈ ကိုယျတှကေ ထဈခြုံးရဲ့ စိတျဆငျရိုငျးကို သတိ ဆိုတဲ့ ခြှနျးနဲ့ အုပျလို့ မရတော့ဘူး ။ အထူးသဖွငျ့ ပေါငျကွားက မို့ဖေါငျးနတေဲ့ အာပုံကွီးကို တှလေို့ကျရလို့ ။ အလတျကွီး ရှိသေးတဲ့ ဒျေါစီစီလှိုငျကို လိုးဖို့ သူ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ ။ ကွီးမား ဆူကွှနတေဲ့ နို့ကွီးနှဈလုံးက သူ့ကို ကိုငျညှဈပါတော့..စို့ပါတော့လို့ ဖိတျချေါနကွေသလိုဘဲ ။ ကုတငျပျေါ တကျလာတဲ့ ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ နို့ကွီးတလုံးကို လကျနဲ့ ဆုပျကိုငျလိုကျပွီး ကနျြတဲ့ တလုံးကို ပါးစပျ နဲ့ ငုံစို့လိုကျနဲ့အခါ ဒျေါစီစီလှိုငျလညျး အရမျး ကနြေပျသှားတယျ ။
မှယေ့ာကွီးပျေါ ပကျလကျ အိပျခလြိုကျ တဲ့အခြိနျ ထဈခြုံးက ပေါငျတနျဖှေးဖှေးလှလှ နှဈခြောငျးကို ဆှဲကားလိုကျပွီး မို့ဖေါငျးတဲ့ စောကျဖုတျကွီးကို သသေခြောခြာ ကွညျ့လိုကျတော့ ဒျေါစီစီလှိုငျက “ ဘာကွညျ့တာလဲ..” လို့ မေးတယျ ။ “ ဒျေါလေး စောကျဖုတျက လှလှနျးလို့ပါ..” လို့ ထဈခြုံးက ဖွလေိုကျပွီး ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ စောကျဖုတျမှာ မကျြနှာအပျ လိုကျရငျး နမျးရှုံ့ပါတော့တယျ ။ “ အို..ထဈခြုံး..ဘာတှေ လုပျနတောလဲ …မငျး..မငျး မရှံဘူးလားဟငျ….” လို့ မေးပွီး ထဈခြုံးရဲ့ ခေါငျးကို တှနျးပဈ တယျ ။ သို့ပမေယျ့ ထဈခြုံးက ဖငျတုနျးကွီးတှကေို အတငျး ဆုပျညှဈကိုငျပွီး စောကျဖုတျကွီးကို တအား စုတျ တအား ယကျတော့တာဘဲ ..။ “ အို..အား……အမလေး…အီး…..ဟငျ့ဟငျ့…….” ဒျေါစီစီလှိုငျ တသကျ တကိုယျ မရဘူးတဲ့ အထိအတှတှေ့ကေို ရသှားလို့ တအား ထူးဆနျးနတေယျ ။ လငျဖွဈသူ တခါမှ မလုပျပေးခဲ့တဲ့ စောကျပတျယကျစုတျတာကို သညျကောငျလေးက လုပျပေးလိုကျလို့ ။
ထဈခြုံးရဲ့ လြာက စောကျဖုတျထဲကို ထိုးသှငျး မှနေောကျပေးတာကွောငျ့ ဒျေါစီစီလှိုငျလညျး ဖငျကွီးတှေ လှုပျခါပွီး တအငျးအငျးနဲ့ သဘောကနြတေယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျ တယောကျ သူ့ဘာဂြာကို ကွိုကျတယျ ဆိုတာကို သိရတော့ ထဈခြုံးလညျး ကွိုးစားပမျးစား မှုတျ ပေးတော့တာဘဲ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျကို လနျ့တဲ့ အရှိနျကွောငျ့ စစခငျြးမှာ မဝံ့မရဲ ဖွဈနခေဲ့ပမေယျ့ ဒျေါစီစီလှိုငျက“ ငါ့နို့တှကေိုလညျး ညှဈပေးလေ..ထဈခြုံး ” လို့ ပွောလာတာကွောငျ့ သူ့လကျတှလေညျး ပို ရဲတငျး သှကျလကျလာတယျ ။ တငျးမာလုံးဝနျးတဲ့ ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ နို့ကွီးနှဈလုံးကို လကျလှမျးပွီး ကိုငျနယျပေးရငျး စောကျဖုတျ ကို ဖိဖိ ယကျပေးတယျ ။ “ အား..ဟငျး..ဟငျး….အငျဟငျ….ကောငျး..ကောငျးတယျ…ယကျ..ယကျ…..ယကျ…..အမလေး….ကောငျးလိုကျတာ..” ဒျေါစီစီလှိုငျ စောကျဖုတျယကျ ခံလို့ ကောငျးလှနျးသလို စောကျဖုတျထဲကလညျး လှိုကျယားနပွေီ ။
တခုခုနဲ့ ထိုး ထညျ့ ဖွဖြေောကျမှ ပွပြေောကျရမယျ့ အခွအေနမှော ထဈခြုံးရဲ့ စံခြိနျမှီ လီးတနျကွီးကို အမွနျ ထိုးသှငျးစခေငျြ လှပွီ ။ “ ထဈခြုံး..တျောတော့ကှာ….ဒျေါလေးကို လုပျပေးတော့…အရမျး လိုခငျြနပွေီကှာ…..” လို့ ထဈခြုံးကို ပွောလိုကျ ပမေယျ့ ထဈခြုံးက ယကျတာ အရှိနျရနတေော့ ရုတျတရကျ ရပျမပဈလိုကျနိုငျဘူး ။ စောကျဖုတျနဲ့ ကပျနတေဲ့ ဖငျစအိုပေါကျ ညိုညိုလေးကိုပါ သူ့လြာနဲ့ ထိုးကလိပေးနတေယျ ။ တအား ခံခငျြလှနျးနလေို့ ဒျေါစီစီလှိုငျလညျး ထဈခြုံးခေါငျးကို တှနျးပဈလိုကျပွီး…“ တျောပွီဆို..ငါ ယားလှပွီ….မငျး လိုးပေးပါတော့ကှာ…” လို့ စိတျမရှညျတော့သလို ပွောလိုကျတယျ ။
ထဈခြုံးလညျး..“ ဒျေါလေးကို ကောငျးစခေငျြလို့ပါ…ဆောရီးဘဲ..” လို့ ပွောရငျး ဒျေါစီစီလှိုငျကိုယျပျေါကို ခှတကျ လိုကျပါတယျ ။ ပေါငျတနျဖွူဖွူနှဈခြောငျးကို ဘေးကို ဖွဲကားလိုကျပွီး အရညျတှေ စိုစိုရှဲနတေဲ့ စောကျဖုတျမှာ သူ့ လီးထိပျကို တလေို့ကျတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျလညျး ယားလှနျးနတေဲ့ စောကျဖုတျထဲကို လီး အမွနျဝငျရေး စိတျစော နတေယျ။ ထဈခြုံးလညျး ဒီလောကျယားနတေဲ့ စျောကွီး အပီကို လိုးထညျ့အုံးမယျ လို့ စိတျထဲ ကွုံးဝါးပွီး သူ့လီး ကို ဖိသှငျးလိုကျတယျ ။ အရညျတှေ ရှဲနတောကွောငျ့ ခဲခဲယဉျးယဉျး မရှိဘဲ လီးကွီး အဖုတျထဲ ဝငျသှားပမေယျ့ အသကျ၅၀ အရှယျ အပြိုမနှဈယောကျရဲ့ အမရေဲ့ စောကျဖုတျက တငျးတငျးကွပျကွပျ ရှိနတောကို သူ အံ့လညျး သွ သဘောလညျး ကသြှားရတယျ ။
ဘကွီးမွိုငျနဲ့ မလိုးတာ ကွာလို့ စောကျဖုတျလညျး အခုလို ကွပျသှားပုံ ရတယျ ။ ဖွညျးဖွညျးခငျြး တိုတောငျးတဲ့ အသှငျးအနုတျလေးတှနေဲ့ စလိုကျတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျ တဟငျးဟငျးနဲ့ သဘောကနြတေယျ ။ သူ့ကို ပွနျဖကျသိုငျးပွီး…“ အငျ..အငျ..ကောငျးတယျ…ရတယျ…လုပျ..လုပျ…” လို့ မကျြလုံး မှိတျပွီး ပွောနတေဲ့ ဒျေါစီစီလှိုငျကို စခငျြနောကျခငျြ လာတာနဲ့“ ဘာလုပျရမှာလဲ ဒျေါလေး…” လို့ မေးလိုကျတဲ့ အခါ ဒျေါစီစီလှိုငျက “ မငျးက သိရဲ့သားနဲ့ကှာ..ငါ့ပါးစပျက ထှကျတာကို ကွားခငျြတယျပေါ့လေ..” လို့ မကျြ စောငျးလေး ထိုးလိုကျပွီး ပွောတယျ ။ “ ဟုတျတယျ..ဘာလုပျပေးရမှာလဲ..” လို့ ထဈခြုံးက နို့ကွီးတလုံးကို ကိုငျဆုပျရငျး မေးလိုကျပွနျတယျ ။ “ လိုးပေး..လိုးပေးဖို့ ပွောနတော..မငျးရဲ့ လီးတုတျတုတျကွီးနဲ့ ဒျေါလေးစောကျပတျကို လိုးပေးပါလို့…” ဖွရေငျး ဒျေါစီစီလှိုငျလညျး အောကျကနေ ဖငျကွီးတှကေို လှုပျခါရငျး ကော့ပေးလိုကျတယျ ။
ထဈခြုံးလညျး ကံကောငျးလှစှာနဲ့ ဘကွီးမွိုငျရဲ့ အိမျက မိနျးမတိုငျးကို လိုးခှငျ့ရပွီး ဆကျတိုကျ လိုးနရေလို့ “ ငါးသိုငျးမြားတော့ ဟငျးဟုနျ ” ဆိုသလို ရိုးအီလာရတယျ ။ သို့ပမေယျ့ ဒျေါစီစီလှိုငျနဲ့ လိုးတာက ပထမဆုံး အကွိမျ ဖွဈပွီး ဒျေါစီစီလှိုငျက သညျအိမျက အဓိက ပါဝါအကွီး ဆုံး လူ ဖွဈတာကို သိလို့ သူ့ကို ခိုကျသှားကွိုကျသှားအောငျ လိုးပေးရမညျ လို့ ဆုံးဖွတျထားပွီး ကကြနြန လိုး ပေးပါတော့တယျ ။ အရငျကလောကျ ကွောကျမနတေော့ဘဲ ပကျလကျ တကျမှောကျ လိုးပေးအပွီး ဖငျကုနျးခိုငျး လိုကျတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျလညျး ကိုယျမှေးထားတဲ့ ခြာတိတျက ကိုယျ့ပွနျခိုငျးနပွေီ ဆိုတာကို သိလိုကျပမေယျ့ သူက ကောငျးကောငျး လိုးပေးနတောမို့ သူ့အလိုကို လိုကျတဲ့ အနနေဲ့ ဖငျထောငျပွီး ကုနျးပေးလိုကျတယျ ။ စိတျထဲမှာလညျး ဖငျကုနျးပွီး ခံရတာ စိတျတှေ ပို ကွှထနျသလို ခံစားရလို့ ။ ထဈခြုံး အပီကိုငျ အပီကွုံးပွီ ။
ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ ဖငျတုနျးကွီးတှကေို လကျနှဈဖကျနဲ့ ဖွဲရငျး စအိုပေါကျ နီညိုညို လေးကို ငုံ့ကွညျ့ရငျး စောကျဖုတျကွီးကို ဆကျတိုကျ ခပျပွငျးပွငျး ဆောငျ့ထညျ့တယျ ။ “ အား….အား….” တဖတျဖတျ အသံတှေ နဲ့ ညညျးသံအျောသံတှေ ဆူညံနတေယျ ။ “ ကောငျးလားဟငျ…” “ ကောငျးတယျ..လိုး…လိုး…ဆောငျ့..ဆောငျ့ကှာ..တအား..တအားဆောငျ့ပေး…..” လိုးသူ ခံသူ အသံတူနတေယျ ။ သူအလိုးကောငျးသလို ခံနတေဲ့ ဒျေါစီစီလှိုငျကလညျး ဖငျကွီးတှကေို ကော့ပဈ ပွီး ခံနတေယျ ။ လီးကွီး ကွုံးဆောငျ့နတောတှကေိ ခံယူနတေယျ ။ အားကုနျ ဆကျတိုကျ ဆောငျ့ပေးတာ သုတျရညျတှေ စောကျခေါငျးထဲကို ပနျးထုတျပဈမိပွီး ပွီးသှားရတယျ ။ “ ဒျေါလေးရော ပွီးရဲ့လားဟငျ…”လို့ မေးမိတော့..“ ပွီးတာမှ နှဈခါတောငျ…” လို့ မောဟိုကျတဲ့ လသေံနဲ့ ဒျေါ စီစီလှိုငျက ဖွတေယျ ။ ထဈခြုံး တကိုယျလုံးလညျး ခြှေးတှေ ရှဲရှဲစိုနတေယျ ။
“ မောသှားလား….” “ ဟငျ့အငျး….” “ မငျး တျောတျော အားကောငျးတာဘဲ….ဟငျး….” “ ဒျေါလေး ကွိုကျလား….” “ အငျး….ကွိုကျတယျ….” “ ဒျေါလေး….လိုခငျြတဲ့အခြိနျ ပွောပါ..ကနြျော လုပျပေးမယျ…” ဒျေါစီစီလှိုငျ ခေါငျးညှိမျ့ပွပါတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျ သညျ ထမိနျရငျလြားနဲ့ ထဈခြုံးကို ကြောခိုငျးပွီး ကုတငျပျေါမှာ တစောငျးလေး လှဲလြောငျးနသေညျ ။ အကငြ်္ီပွနျမဝတျသေးပုံထောကျတော့ ငါနဲ့ နောကျတခြီ နောကျတကွောငျးလောကျ ထပျဆှဲခငျြသေး တဲ့ ပုံ ရှိတယျ လို့ ထဈခြုံး စိတျထဲမှာ တှေးနတေယျ ။ လိုတာ မရရှာတဲ့ ဒျေါစီစီလှိုငျကို သူ ဆန်ဒဖွညျ့ဆညျး ပေးခငျြမိတယျ ။ ဘကွီးမွိုငျနဲ့ ဘယျလို မကျြနှာခငျြး ဆိုငျရမယျတော့ မသိဘူး ။ ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ ကပျပွီး ကုတငျပျေါမှာ ထိုငျလိုကျတယျ ။ “ ကနြျော နှိပျပေးရမလားဟငျ…” လို့ ခပျတိုးတိုး မေးလိုကျတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျဆီက “ အငျး…”လို့ တိုးတိုး လေး ဖွလေိုကျသံကို သူ ကွားလိုကျရလို့ အဝတျမဲ့နတေဲ့ ပုခုံးသားတှကေို သူ့လကျနဲ့ ခပျဖှဖှ စ နှိပျပေး လိုကျတယျ ။
“ ထဈခြုံး…” “ ဗြာ….” “ မငျးနဲ့ ငါ ကိစ်စ မငျး နုတျလုံမှာလား…” “ ဟုတျ..ကနြေျာ့အတှကျ စိတျခပြါ …လုံပါတယျ…” “ အေး..ဟိုကောငျ..စိုးမိုးကို မသိစနေဲ့နျော..ဒီကောငျက ငါ့ကို ကွံခငျြနတော..သူက မငျးဘကွီးမွိုငျ နဲ့ငါ မအိပျကွဘူး ဆိုတာ သိတယျ…ဟငျး..လူလညျ…ဒီကောငျ….” “ ကနြျော ဘယျသူ့ကိုမှ မပွောပါဘူး..ဂတိပေးပါတယျ…” “ အငျး….ဟုတျပွီလေ….အိမျမှာတော့ မငျးနဲ့ ငါ ခပျတနျးတနျးဘဲ နကွေမယျ..သိလား..လူတှရှေေ့…” “ ဟုတျ..ဒျေါလေး…” သူ့လကျဖဝါးက ဒျေါစီစီလှိုငျ့ ကြောပွငျတလြောကျ ပှတျသပျပေးနတေယျ ။ ထမိနျက နဂိုထဲက လြော့ရညျးရညျး နဲ့ ဆိုတော့ သူ ဆှဲခလြိုကျပွီး ခါးအထိ ဆကျ ပှတျပေးနတေယျ ။ ဝငျးမှတျ ဖွူဖှေးတဲ့ အသားနဲ့ အထိအတှေ့ တှကေ သူ့စိတျတှကေို ပွနျနိုးထလာစတေော့ သူ့ပေါငျကွားက ဖှားဖကျတျော လညျး တငျးမာလာရပွနျပွီ ။
ခါးကနေ အောကျဖကျ ဆကျ ဆငျးတော့ စှငျ့ကားဝိုငျး နတေဲ့ တငျပါးကွီးတှဆေီကို သူ့လကျ ရောကျသှားတယျ။ ဒျေါစီစီလှိုငျ သူ့အကိုငျအတှယျတှကေို မငွငျး မတားဘူး ။ သဘောကြ ကနြေပျနတေဲ့ပုံ ။ တငျပါးကွီးတှကေို ပှတျပေးနရောက လကျနဲ့ ဆုပျညှဈလိုကျမိတယျ ။ ဟငျး….ပေါငျကွားက ငပဲ ထနျးကနဲ ထောငျသှားတယျ ။ တငျစိုငျနှဈလုံးရဲ့ ကွားထဲကို လကျခြောငျးတှေ ရောကျ သှားတယျ ။ စအိုပေါကျတှနျ့တှနျ့လေးကို လကျညှိုးနဲ့ ကလိလိုကျတော့ “ အို့..” ဆိုတဲ့ အသံလေး ထှကျလာ တယျ ။ ဆကျ ပှတျပေးနမေိတဲ့အခြိနျ ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ လကျတဖကျက နောကျပွနျ လာစမျးတယျ ။ သူ့ပေါငျတနျ တှေ ကွားထဲကို စမျးမိသှားတော့ သူ လီးတောငျနတော သိသှားပွီး..ဒျေါစီစီလှိုငျ ရယျတယျ ။ “ ကွညျ့စမျး..မငျး ပွနျမာနပွေီ…မငျး သိပျ အားကောငျးတဲ့ ကောငျလေး…” လို့ ပွောလိုကျရငျး သူ့ဖကျကို လှညျ့ လာတယျ ။ ထမိနျက ပွကေနြတေော့ နို့ကွီး နှဈလုံး ပျေါနတေယျ ။ နို့ကွီးတှကေို အငမျးမရ ကိုငျဆုပျလိုကျ မိတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျက “ ကွိုကျလား…” လို့ ပွုံးပွီး မေးလိုကျတယျ ။
“ ကွိုကျတယျ…ဒျေါလေး..ကနြျော စို့လို့ရမလား….” လို့ ခှငျ့တောငျးသလို မေးလိုကျတော့..“ အငျး…” လို့ ဖွတော နဲ့ နို့ကွီးတလုံးက နို့သီးဖုလေးကို စပွီး စို့လိုကျတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ မကျြလုံးတှေ မှိတျသှားတယျ ။ နို့စို့ရငျး ထမိနျကို ဆှဲခြှတျပဈလိုကျတယျ ။ ကိုယျလုံးတီး ဖွဈသှားတဲ့ ဒျေါစီစီလှိုငျက “ ရှကျတယျကှာ..” ဆိုပွီး ပေါငျတနျတှကေို စလေို့ကျပွီး လကျနဲ့ကာ ဖို့ လုပျပမေယျ့ သူက လကျတှကေို ဆှဲဖယျလိုကျသလို ပေါငျတနျတှကေို ဘေးကို ဖွဲကားပဈလိုကျတယျ ။ သူ့ ခေါငျး သူ့မကျြနှာကို စောကျဖုတျကွီးဆီကို တိုးကပျ အပျလိုကျပွီး စနမျးရှုံ့တော့ “ ဟဲ့ အို….ကဲလိုကျတာ..” လို့ ပွောသံ ကွားလိုကျရပမေယျ့ ပွုံးစိစိနဲ့ ကနြေပျနတေဲ့ ပုံကိုတှရေ့လို့ စောကျဖုတျ အကှဲအတိုငျး လြာနဲ့ စုံခြီ ဆနျခြီ ယကျပေးလိုကျပါတော့တယျ ။
စောကျစိကို အပီ ကလိပေး သလို ဖငျပေါကျညိုညိုလေးကိုပါ လြာနဲ့ ကလိပေးလိုကျတယျ ။ သညျ တခြီမှာတော့ ထဈခြုံးလညျး ပို ရဲတငျးလာသလို ဒျေါစီစီလှိုငျကလညျး ပို ပှငျ့လငျးလာတယျ ။ ရဲလာတယျ။ ထဈခြုံး ဘာဂြာကိုငျပွီးတဲ့နောကျ “ မငျးကို ဘာလုပျပေးစခေငျြလဲ…” လို့ မေးလာတယျ ။ “ ပုလှကေိုငျပေးမလားဟငျ..” လို့ သူ အရဲစှနျ့ပွီး မေးကွညျ့လိုကျတယျ ။ “ အငျး..လုပျပေးမယျလေ…” ဒျေါစီစီလှိုငျက သူ့ကို ပကျလကျ အိပျခိုငျးလိုကျပွီး မတျမတျထောငျနတေဲ့ လိငျခြောငျးကို ငုံ့စုတျလိုကျတယျ ။ ထဈခြုံး အဖို့ အိပျမကျ တခုလိုဘဲ ဖွဈနတေယျ ။ သူတို့အိမျက အရှငျသခငျ ဒျေါစီစီလှိုငျက သူ့ဒုတျကို အရငျးပိုငျးကနေ ဆုပျကိုငျပွီး ကကြနြန စုတျပေးနလေို့ ။ ဒါကွောငျ့ လောကမှ မဖွဈနိုငျဘူး ဆိုတာ မရှိ..မဖွဈသေးတာဘဲ ရှိမယျ ဆိုတဲ့ စကား ရှိတယျလေ ။ မထငျတာတှေ ဖွဈပကျြနပွေီ ။
လီးကို အားရပါးရ စုတျနတေဲ့ ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ ပါးစပျထဲကို သူ မသိမသာ ကော့ကော့ပွီး ထိုညှောငျ့မိနတေယျ။ သူ့ေ၈ှးစိနှဈလုံးကိုလညျး ဒျေါစီစီလှိုငျက ဆုပျနယျကစားနတေယျ ။ တျောတျောကွာအောငျ စုတျပေးပွီးမှ လီးကို ပါးစပျကနေ ခြှတျခှာလိုကျပွီး..“ ကောငျးလား…” လို့ မေးတယျ ။ “ အရမျးကောငျးတာဘဲ ဗြာ….” လို့ ဖွလေိုကျတ့ အခြိနျ ဒျေါစီစီလှိုငျက သူ့ကိုယျပျေါကို ခှတကျထိုငျလိုကျတယျ ။ အိုး…အပျေါက လုပျမယျ့သဘော ..။ သညျ ဒုတိယ တခြီမှာတော့ ဖုတျပူမီးတိုကျ မဟုတျတော့ဘဲ အရသာခံပွီး ပုံစံ အမြိုးမြိုးပွောငျးပွီး လိုးကွတယျ ။ တျောတေျာ့ကို ရငျးနှီးသှားရပွီး အရှကျလညျး ကုနျသှားတယျ ။ စိတျကွိုကျ လိုးဖွဈကွတယျလို့ ပွောရမယျ ။
အပွနျခရီးမှာ ကားပျေါမှာ ဘကွီးမွိုငျရဲ့ အကို ယူအကျဈက ဘကွီးခိုငျတို့သဘကျခါဆို ရနျကုနျကို ရောကျတော့ မယျ လို့ ဒျေါစီစီလှိုငျက ပွောပွတယျ ။ သူတို့ လာမယျ ဆိုပွီး ထဈခြုံးတို့ လိုတာတှေ ပွငျဆငျ ထားခဲ့တာ တျောတျော ကွာနပေါပွီ ။ အိမျရောကျတော့ ထဈခြုံး သူ့တနျးလြားကို ပွနျရောကျပွီး ရခြေိုးဖို့ ပွငျနခေိုကျ ဒျေါသိနျးက ဘကွီးမွိုငျ ချေါတယျ လို့ လာပွောလို့ ရငျထဲ ထိတျသှားတယျ ။ ..ငါနဲ့ သူ့မိနျးမ ဖွဈတာမြား သိသှားလသေလား…ဆိုပွီး စိတျတအား ပူသှားတယျ ။ ကတုနျကရငျနဲ့ ဘကွီးမွိုငျ ရှိတဲ့ တိုကျကွီး အပျေါထပျကို ထဈခြုံး တကျခဲ့လိုကျတယျ ။ပဲခူးမှာ တုံးက ကိုစိုးမိုးဟာ ဘကွီးမွိုငျ..ဘကွီးခိုငျတို့ လငျမယား နှဈစုံကို ဘုရားဖူး ဈေးဝယျ လိုကျပို့ပေးရတဲ့ အခြိနျ ဘကွီးမွိုငျရဲ့ မိနျးမ ဒျေါစီစီလှိုငျနဲ့ရော ဘကွီးခိုငျရဲ့ မိနျးမ ဒျေါစတယျလာနဲ့ရော နီးနီးကပျကပျ လကျပှနျးတတီး နခေဲ့ ဆကျဆံခဲ့ရတဲ့ အခြိနျ ဒီကတျောကွီး နှဈယောကျက အထာပေးသလိုလို ညုသလိုလို နဲ့ သူ့စိတျတှကေို ထကွှစခေဲ့ပမေယျ့ ကိုစိုးမိုးလညျး မိသှားရငျ အကငျြးခံရမယျ့အပွငျ မျောစကိုကိုပါ ရောကျ သှားမှာမို့ စိတျကို ထိနျးပွီး ငွိမျကုပျနခေဲ့တယျ ။ တကယျတမျး တီးခငျြတာက မိုးမိုးခိုငျလေး ။
ဖွူဝငျး တောငျ့တငျးတဲ့ ကိုယျလုံးလေးက လှလှနျးလို့ စိတျကူးနဲ့ အဝတျတှေ ခြှတျကွညျ့နမေိတယျ ။ နို့ကွိးတှကေ ဘယျလိုနမှော…စောကျဖုတျလေးက ဖေါငျးအိနမှော..စသဖွငျ့ စိတျကူးတှေ ယဉျနမေိတော့ လီးက မာကြော တောငျမတျလာတယျ ။ ပုဆိုးပျေါကဘဲ လီးကို လကျနဲ့ ဆုပျကိုငျမိလိုကျတယျ ။ အငျး..မိုးမိုးခိုငျကို ဗငျြးရရငျ ကောငျးလိုကျမယျ့ ဖွဈခွငျး ….လို့ စိတျနဲ့ မှနျးဆရငျး လီးကို ပှတျတိုကျ ကှငျးထု မိနတေယျ ။ မိုးမိုးခိုငျလညျး စီးကရကျ သောကျပွီးသှားလို့ တိုကျဖကျကို ပွနျသှားလိုကျတဲ့ အခြိနျ ကြောဖကျကနေ တငျပါးအိ အိတငျးတငျးတှေ တုနျခါ လှုပျသှားတာတှကေို မကျြလုံးကွီး အပွူးသားနဲ့ စိုကျကွညျ့နမေိတယျ ။
ဟငျး…ကောငျးလိုကျတဲ့ ဖငျကွီးတှေ …အမလေး….လေးဖကျထောကျ လိုးလိုကျလို့ကတော့ အီဆိမျ့နမှောဘဲ ။ ဒီအခြိနျမှာ နျောတုလု သူ့အခနျးကို ရောကျလာတယျ ။ “ ကိုစိုးမိုး…အနျတီလှိုငျ…ချေါတယျ …” “ ဟေ….ဘာတဲ့လဲ..ခုဘဲ ခရီးဝေးက ပွနျရောကျတာ..ဘယျထှကျကွအုံးမလို့လဲဟာ….” ကိုစိုးမိုးသညျ မိုးမိုးခိုငျ ဖငျတှကေို ငေးမောပွီး မှနျးပွီး ကှငျးကိုငျနတောမို့ ရုတျတရကျ စိတျတိုသှားတယျ ။ “ ဒါတော့ ကမြလညျး မသိဘူး…သူ့သှားမေးခညျြ…” လို့ နျောတုလုက မကျြစောငျးထိုးရငျး ခပျစှာစှာ ပွနျပွော လိုကျတာကို သူ ခံရတယျ ။ နျောတုလုကလညျး အရငျထကျ နို့ကွီးတှေ ပိုထှားလာသလိုဘဲ ။ ဒီကောငျမကို ဆှဲ လိုးပဈလိုကျရငျ ကောငျးမယျ လို့ သူ့စိတျရိုငျးတှကေ ကွံစညျမိလိုကျတယျ ။ သို့ပမေယျ့ သူ့အခနျးပေါကျဝ မှာ ဒျေါစီစီလှိုငျ ကိုယျတိုငျ ရောကျနတောကို တှလေို့ကျရလို့ ကိုယျရှိနျသတျ လိုကျရတယျ ။
“ စိုးမိုး….ဘာအပငျြးကွီးနတောလဲ…ထ…..ထ….ငါ အပွငျထှကျမလို့ …” ဒျေါစီစီလှိုငျက ခပျမာမာ ခပျစှာစှာနဲ့ ပွောလိုကျလို့ သူ ကဗြာကယာ ထလိုကျရတယျ ။ သူ့ပုဆိုးအောကျက ငပဲ တနျကွီးကတော့ မတျနဆေဲ ။ နျောတုလုလညျး တိုကျဖကျကို ပွနျလြှောကျသှား နတေယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျလညျး ကိုစိုးမိုးရဲ့ ပလကေပျ ပုဆိုး အောကျက လတနျခြောငျးကွီး မာမတျနတောကို တှလေို့ကျရလို့ သသေခြောခြာ စူးစိုကျ ကွညျ့နတေယျ ။ “ ဟဲ့..စိုးမိုး..အဲဒါက ဘယျလို ဖွဈတာတုနျး…” “ ဗြာ….ကနြျော ဘာလုပျမိလို့လဲဟငျ….” “ အံမယျ..မငျး ဘာဖွဈနတေယျ ဆိုတာ မငျး အသိဆုံးဘဲ…မငျး ပေါငျကွားက ထောငျနတောကို မေးနတော..” “ အဟီး…ဆောရီးဘဲ ဒျေါလေး . . ကြ..ကနြျော…ကနြျော … ” “ ဟငျး..ရုပျကိုက …ကဲ..ကဲ..ငါ ဈေးသှားစရာ ရှိလို့..လိုကျပို့စမျး…” “ ဟုတျကဲ့…ဒျေါလေး….” ဒျေါစီစီလှိုငျသညျ ကြောကျစိမျးရောငျ အသားပြော့ပြော့ အထကျအောကျ ဆငျတူ ဝတျထားတယျ ။
အသားဖှေးဖှေး ဖွူသူမို့ သူဝတျထားတဲ့ အတျအစားနဲ့ လိုကျဖကျ ကွညျ့ကောငျးလှတယျ လို့ ကိုစိုးမိုး ထငျ မိတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျနဲ့ အိမျကနေ ထှကျခဲ့ရတဲ့အခါ လမျးမပျေါ ရောကျတာနဲ့ ကိုစိုးမိုးက “ ဒျေါလေး..ဘယျကို မောငျး ရမလဲ..” လို့ မေးလိုကျတယျ ။ “ မငျးနဲ့ စကားပွောစရာတှေ ရှိတယျ..စိုးမိုး..တနရောရာကို သှားပွောရအောငျ…” “ ဟုတျကဲ့ ဒျေါလေး…ဘယျလိုနရောကို မောငျးရမလဲဟငျ…” “ ဟိုတယျ တခုခုပေါ့ကှာ…နာရီပိုငျး ငှားတဲ့ နရော တခုခုပေါ့..” ကိုစိုးမိုး သဘောပေါကျပွီ ။ ရငျတှလေညျး အခုံမွနျလာသညျ ။ ငါတော့ ကံကောငျးတော့မလား….လို့ တှေးမိလိုကျတယျ ။ သူက ဒီလိုနရောတှေ သိထားသူမို့ နာရီပိုငျး ယူလို့ရတဲ့ ရှဂေုနျတိုငျဖကျက ဟိုတယျတခုကို မောငျးလိုကျတယျ ။ ဒီဟိုတယျက ကောငျးတာက ကးပျေါက ဆငျးစရာ မလိုဘဲ ဟိုတယျ အခနျးတှနေားအထိ ကားကို မောငျးဝငျသှား လို့ရတာကွောငျ့ ကိုယျ့ကို လူမမွငျဘူး ။
ကိုယျ့ကို အခနျးသော့ လာပေးတဲ့ ဟိုတယျက ဝနျထမျး ကောငျလေး တယောကျနဲ့ဘဲ ဆကျဆံရတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျလညျး သဘောကသြှားတယျ ။ ဟိုတယျခနျးထဲကို နှဈယောကျသား ဝငျလိုကျကွတာနဲ့ ကိုစိုးမိုး စိတျတှေ လှုပျရှားပွီး သူ့လီးက မတျနပွေီ ။ တောငျနပွေီ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ ခါးသေးသေး အောကျက စှငျ့ကားနတေဲ့ တငျပါးကွီးတှကေို ဖတျြကနဲ ကွညျ့မိလိုကျတယျ ။ ဟူး….ကောငျးလိုကျတာ…..။ “ စိုးမိုး…” “ ဗြာ …” “ မငျး…ပဲခူးမှာ တုံးက ဘာ မသိခငျြယောငျ ဆောငျနတောလဲ….မငျး “ အ ”ခငျြယောငျ ဆောငျနတောလား …” “ ဗြာ….ဟို…ဟို….ဟိုဒငျး….” ပဲခူးမှာတုံးက ဘကွီးမွိုငျရဲ့ မိတျဆှရေဲ့ ခွံထဲသှားလညျကွတဲ့ အခါ ညဖကျ မှောငျမှ ပွနျကွတော့ ခွံဝမှာ ရပျထား ခဲ့တဲ့ ကားဆီကို အားလုံး ပွနျလြှောကျကွတဲ့ အခြိနျ အမှောငျထဲမှာ ကိုစိုးမိုးရဲ့ အရှကေ့ လြှောကျနတေဲ့ ဒျေါစီ စီလှိုငျက လကျလှဲရငျး ကိုစိုးမိုးရဲ့ ပေါငျကွားကို ထိမိသှားတယျ ။
သူ့ငပဲတနျကို မိမိရရကွီး စမျးမိခဲ့တာမို့ ကိုစိုး မိုး တျောတျော တုနျလှုပျသှားခဲ့တယျ ။ မတောတဆဘဲလို့ ထငျခဲ့မိတယျ ။ အခုတော့ ဒျေါစီစီလှိုငျ ပွောပုံအရ တမငျတကာ လာထိကိုငျလိုကျတာ ဖွဈမယျ ။ “ စိုးမိုး..ကဲ နုံခငျြယောငျ ဆောငျမနနေဲ့..ကဲ…မငျး ငါ့ကို သဘောမကဘြူးလား…ပွောစမျး…ကွညျ့..ငါ့ကို…” ဒျေါစီစီလှိုငျသညျ ကိုယျဟနျပွမယျ တယောကျလို သူမကိုယျကို လှညျ့ပွလိုကျတယျ ။ “ ဟုတျ..ဟုတျ….ဟို..ဟို….” “ အရူးကှကျ နငျးမနနေဲ့ စိုးမိုးရယျ..လာစမျး….” ဒျေါစီစီလှိုငျက ကိုစိုးမိုးရဲ့ ပလကေပျပုဆိုးကို ဖတျြကနဲ ဆှဲခြှတျခပြဈလိုကျတယျ ။ “ အိုး…ဟား….” အတှငျးခံဘောငျးဘီ ခံမဝတျတတျတဲ့ ကိုစိုးမိုးရဲ့ အောကျပိုငျး တခုလုံး ဗလာကငျြးသှားပွီး လီးတုတျတုတျကွီး ငေါငေါကွီး ပျေါသှားတယျ ။
ဒျေါစီစီလှိုငျက လီးတနျကွီးကို တပျမကျစှာနဲ့ စိုကျကွညျ့နပွေီး…“ မငျး ကုတငျပျေါ ထိုငျလိုကျစမျး..စိုးမိုး…” လို့ အမိနျ့ပေးလိုကျတယျ ။ ကိုစိုးမိုးလညျး လီးကွီး ထောငျရကျနဲ့ ကုတငျပျေါ ထိုငျလိုကျတော့ ဒျေါစီစီလှိုငျလညျး ကိုစိုးမိုး ဘေးမှာ ဝငျထိုငျလိုကျရငျး ဆတျကနဲ လီးကွီးကို ကိုငျဆုပျလိုကျတယျ ။ “ အားပါး…..မငျး လီးက တျောတျော ကွီးတာဘဲ …” လို့ သဘောကသြလို ပွောလိုကျရငျး လီးတနျကို ပှတျသပျ ကွညျ့နတေယျ ။ ကိုစိုးမိုး ထငျထားသလိုဘဲ သူ ကံကောငျးပွီ ။ သူဌေးကတျောကိုတော့ သူ ဝါးရတော့မယျ ..။ “ ငါ…ကွိုကျတယျ….မငျး တျောတျော ယောကျြား ပီသတာဘဲ …” ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ လကျက ကိုစိုးမိုးရဲ့ ဖှားဖကျတျောကွီးရဲ့ ထိပျဖြားကနေ အရငျးပိုငျး အထိ ထိတယျ ဆိုရုံလေး ပှတျသပျနတေယျ ။
ကိုစိုးမိုးသညျ ဒီအထိအတှတှေ့ကွေောငျ့ စိတျတှေ ထသထကျထလာပွီးဖှားဖကျတျောမှာ သံခြောငျးကွီးတခြောငျးလို မာကြောလာပွီး မတျမတျကွီး ထောငျလာတော့ ဒျေါစီစီလှိုငျက သဘောကပြွီး တဟငျးဟငျးနဲ့ ရယျလိုကျတယျ ။ ပွီးတော့ “ စိုးမိုး..မငျး ငါ့ဖငျကွီးတှကေို ကွညျ့ကွညျ့ပွီး စိတျတှေ ကွှကွှနခေဲ့တယျ မဟုတျလား….ငါ သိပမေယျ့ မသိခငျြယောငျ ဆောငျနခေဲ့တာ….မငျး ငါ့ကို စိတျမှနျးမှနျးပွီး ကှငျးထုတယျ မဟုတျလား….” လို့ မေးလိုကျတော့ ကိုစိုးမိုးလညျး မငွငျးဘဲ “ ဟုတျပါတယျ ဒျေါလေး….” လို့ ဖွလေိုကျတယျ ။ “ မငျး ငါ့ဖငျကွီးတှကေို အဝတျမပါဘဲ မွငျဘူးလား…..” “ မ….မ…..မ….မွငျဖူးပါဘူး….” ကိုစိုးမိုး တံတှေးကို ဂုကနဲ မွို ခလြိုကျပွီး ဖွလေိုကျတယျ ။ “ မငျး မွငျခငျြလား…..” “ ဟုတျ..ဟုတျကဲ့ …..” ဒျေါစီစီလှိုငျလညျး အရငျဆုံး ထမိနျကို ခြှတျခလြိုကျတယျ ။ အသား ပြော့ပြော့ ထမိနျလေးက ဟုတျကနဲ ကွမျးပျေါကို ကှငျးလုံးပုံ ကသြှားသညျ ။
ပငျတီပါးပါး အဖွူလေး ဘဲ ကနျြတဲ့ ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ ကိုယျအောကျပိုငျးတှကေို ကိုစိုးမိုး အငမျးမရ ကွညျ့လိုကျတယျ ။ ပေါငျဂှဆုံနရောက မို့ဖောငျးဖောငျး နရောကို သသေခြောခြာ စိုကျကွညျ့မိတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျက ပငျတီလေးကိုပါ လကျနှဈဖကျနဲ့ ဆှဲခြ ခြှတျလိုကျတယျ ။ အကငြ်္ီကိုလညျး ခြှတျလိုကျတယျ ။ ဘရာစီယာအောကျက နို့ကွီး နှဈလုံးက ဘရာစီယာရဲ့ ခြုပျနှောငျထားတာကို အတငျး ရုနျးထှကျခငျြနကွေသလိုဘဲ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျက ဘရာစီယာ ခြိတျကိုလညျး ဖွုတျပဈလိုကျရော ဖှံ့ထှားတဲ့ နို့ကွီး တှေ ဘှားကနဲ ပျေါလာတယျ ။ “ ဘယျလိုလဲ….ဘာထငျသလဲ..စိုးမိုး…..” “ အရမျးလှတာဘဲ ဒျေါလေး…..” “ လာ..ဒို့ အခြိနျ သိပျမရှိဘူးကှ..အိမျမှာ စတယျလာတို့ကို ထားခဲ့တာ…..” ဒျေါစီစီလှိုငျက ကုတငျစောငျးမှာ ဝငျထိုငျလိုကျပွီး ပေါငျတနျနှဈခြောငျးကို ဖွဲကားလိုကျတယျ ..။
“ စိုးမိုး….မငျး ငါ့ကို မှုတျခငျြလား…..” “ ဟုတျ..ဟုတျကဲ့….” “ လာ…မှုတျလေ ….” “ ဟုတျကဲ့….” ကိုစိုးမိုး ပေါငျတနျဖွူဖွူ နှဈခြောငျးရဲ့ အလညျခေါငျမှာ ဒူးထောကျ ထိုငျခလြိုကျပွီး မို့ဖေါငျးတဲ့ စောကျဖုတျကွီးကို စ နမျးရှုံ့ပါတော့တယျ ။ အမှေး ရိပျထားတဲ့ စောကျဖုတျကွီးက မို့အိနသေညျ ။ အကှဲကွောငျးကွီးက အသား ဆှတျဆှတျဖွူသူမို့ ပနျးနုရောငျလေး ။ နှုတျခမျးသားထူထူတှကေ ရဲနပေမေယျ့ ပွဲဟနတေယျ ။ အတှငျးသားနီနီရဲရဲလေးတှကေို တပိုငျးတစ တှနေ့ရေတယျ ။ ကိုစိုးမိုး အငမျးမရ လြာနဲ့ ယကျပွီ ။ သညျ အခြိနျအခါမြိုး ရပါစေ ဖွဈပါစလေို့ ကြိတျ ဆုတောငျးခဲ့တာ ကွာပွီ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျကို စိတျနဲ့ မှနျးပွီး ကှငျးတိုကျခဲ့ရတာလညျး အကွိမျပေါငျး မရမေတှကျနိုငျတော့ဘူးလေ ။ ဖငျကွီးတှကေို ကွညျ့ပွီး လီးတောငျရတာလညျး နတေို့ငျးဘဲ ။ အခုတော့ သူ့စိတျကွိုကျ စောကျ ဖုတျ ယကျခှငျ့ကို သူ ရနပွေီ ။
ပေါငျတနျတှကေို ဆုပျကိုငျဖွဲပွီး ဖိယကျလိုကျတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျ မကျြစိတှေ ပိတျထားပွီး ခံနတေယျ ။ “ အား…ရှီး…အငျး…အငျး……အီး… ပလပျ…….ပွတျ…ပလပျ…….ပွတျ……..။ ကိုစိုးမိုးလညျး အစိလေးကို လြာနဲ့ ထိုးကျောလိုကျ စုတျလိုကျ အမြိုးမြိုး ကလိပေးနတေော့ ဒျေါစီစီလှိုငျ လညျး တအားကို အကွိုကျတှနေ့တေယျ ။ ဟိုတလောက လိုးဖွဈလိုကျတဲ့ ထဈခြုံး နဲ့တုံးကလိုဘဲ သဘောကမြိတယျ ..။ ဖိယကျပေးနတေဲ့ ကိုစိုးမိုးကို “ တျောလိုကျတော့ ဒျေါလေး မနနေိုငျတော့ဘူးကှာ….” လို့ ပွောလိုကျလို့ ကိုစိုးမိုးလညျး စောကျဖုတျကနေ မကျြှာ ခှာလိုကျပွီး..“ ဘာလို့လဲ.. ဒျေါလေး..ကနြျော မှုတျတာ မကောငျးလို့လားဟငျ…” လို့ မေးလိုကျတယျ ။ “ မဟုတျဘူး..ဒျေါလေး လိုခငျြနပွေီ …ဒျေါလေးကို လုပျပေးတော့ကှာ….” လို့ ဒျေါစီစီလှိုငျက ဖွတေယျ ။
ကိုစိုးမိုးလညျး ခကျြခငျြးဘဲ ကုနျးထပွီး ဒျေါစီစီလှိုငျ အပျေါ တကျခှပွီး သူ့လီးကွီးကို စောကျ ဖုတျဝမှာ တပွေီ့း သုံးလေးခါလောကျ စုနျခြီ ဆနျခြီ ပှတျတိုကျလိုကျပွီးမှ ဖိသှငျးလိုကျတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျလညျး “ အိ ”လို့ အသံထှကျသှားပွီး ကိုစိုးမိုးကို လှမျးဆှဲကိုငျလိုကျတယျ ။ ပွိကနဲ လီးကွီး ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ စောကျပတျထဲကို တိုးဝငျသှားပွီ ။ လုံးပတျတုတျတဲ့ကောငျကွီးမို့ စောကျဖုတျ အတှငျးသား နံရံတှကေို တထဈထဈနဲ့ ပှတျဆှဲသှားလို့ ဒျေါစီစီလှိုငျ တဖငျြးဖငျြးနဲ့ အရသာ ထူးသှားတယျ ။ ကိုစိုးမိုးက သူ တခြိနျလုံး လိုးခငျြနခေဲ့တဲ့ သူဌေးကတျော ဖွူဖွူဖှေးဖှေး ရဆေေးငါးကွီးကို လိုးခှငျ့ရပွီ ဆိုတော့ အရမျး ပြျောသှားပွီ ။ ဖိသှငျးလိုကျ ပွနျဆုတျလိုကျနဲ့ ဖွညျးဖွညျးခငျြး စလိုးပွီ ။ “ စိုးမိုး..နို့တှကေို ကိုငျလိုးစမျးပါဟာ….” “ ဟုတျကဲ့ ဒျေါလေး…” နို့ကွီး နှဈလုံးကို ဆုပျနယျလိုကျ ပါးစပျနဲ့ စို့လိုကျ လုပျရငျး စောကျဖုတျထဲကို ဖိဖိ လိုးဆောငျ့လိုကျတယျ ။
ဒျေါစီစီလှိုငျလညျး လငျကွီး မလိုးနိုငျလို့ တအား ဆာလောငျ မှတျသိပျနရေတာမို့ အခုလိုတှေ ရှိတဲ့အလုပျသမားတှနေဲ့ ကုနျးဖွဈသှားရတာ ။ စိုးမိုးရဲ့ လီးကိုရော စိုးမိုး လိုးတာကိုရော သူမ ကွိုကျသှား ရပွီ ။ စိုးမိုးလညျး လှကွေီးထိုး ပကျလကျ အနအေထားနဲ့ အားရအောငျ လိုးအပွီး ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို သူ့ပုခုံးပျေါကို ထမျးတငျပွီး လိုးပွနျတယျ ။ အရှိနျက မွနျဆနျ သှကျလကျနပွေီ။ “ အား..ရှီး…….ဆောငျ့…ဆောငျ့…ဆောငျ့ပါ စိုးမိုးရဲ့..တအားနငျး ဆောငျ့လိုကျစမျးပါ . . . ”လို့ အားမလို အားမရ တောငျးဆိုနတေဲ့ ဒျေါစီစီလှိုငျလညျး ကိုစိုးမိုးက သူမလိုခငျြတဲ့ အတိုငျး ခပျကွမျး ကွမျး ပွငျးပွငျး ဆောငျ့ပေးလိုကျလို့ ကနြေပျသှားတယျ ။
“ ကောငျးတယျ…အိုး…ကောငျးတယျ…အား…အား….အား….” ကိုစိုးမိုးလညျး ဒျေါစီစီလှိုငျ ပွီးသှားတယျ ဆိုတာကို သိလိုကျတယျ ။ သူလညျး တအား ကောငျးသထကျ ကောငျးလာလို့ ဒျေါစီစီလှိုငျလညျး ပွီးသှားရော သုတျရညျတှေ ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ စောကျဖုတျ အ တှငျးထဲကို ပနျးထုတျလိုကျရငျး ပွီးလိုကျတယျ ။ ဘကွီးခိုငျတို့ မိသားစုကို အိမျမှာ ထားခဲ့ရလို့ ဒီနတေ့ော့ ဒီလောကျပါဘဲ လို့ ဒျေါစီစီလှိုငျက ကိုစိုးမိုးကို ပွောလိုကျတယျ ။ ကိုစိုးမိုးက တကယျတော့ နောကျထပျ ထပျ လိုးခငျြနသေေးတာ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျက “ စိုးမိုး နငျ အခုလို နငျနဲ့ ငါနဲ့ ဖွဈကွတာကို ဘယျသူ့ကိုမှ လြှောကျ မဖှနဲ့နျော..” လို့ ပွောလိုကျတဲ့ အခါ “ ဟာ..စိတျခစြမျးပါဗြာ..ကနြျော ဘာလို့ ပွောရမှာလဲ … ဘယျသူမှ မသိစရေဘူး..ဒျေါလေး…” လို့ ပွနျပွောလသေညျ ။ ကိုစိုးမိုး အတှကျက အိပျမကျ လိုဘဲ ဖွဈနတေယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျကို စိတျကွိုကျ လိုးခှငျ့ရသှားတာ တအား ကနြေပျသှားတယျ ။
အိမျကို ပွနျရောကျခါနီး..ဒျေါစီစီလှိုငျက “ ဧညျ့သညျတှေ ပွနျသှားပွီးတဲ့ အခါ မငျးနဲ့ ဒျေါလေးနဲ့ ထပျသှားကွသေးတာပေါ့ အဲ့ ဟိုတယျကို…” လို့ ပွောတယျ ။ ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ ကိုယျလုံးတီး ကိုယျတှကေို မကျြလုံးထဲမှာ ပွနျမွငျယောငျမိရငျး ကိုစိုးမိုး စိတျတှေ ထကွှလာမိရပွနျတယျ ။ ဒါကွောငျ့ “ ဒျေါလေး…..ကနြျော..ထပျလုပျခငျြသေးတယျဗြာ . .ကနြေျာ့ လီး ပွနျတောငျလာပွီ..” လို့ ပွောလိုကျတော့ ဒျေါစီစီလှိုငျက “ အခြိနျ မရှိတော့ဘူးကှယျ…..နောကျမြားမှာဘဲ…..” လို့ ပွော လိုကျတယျ ။ ကိုစိုးမိုးက “ ဒျေါလေး…တအား စှဲတယျဗြာ..ဒျေါလေး..ကနြေျာ့ကို အဆငျပွတေဲ့အခြိနျ ထပျ တှခှေ့ငျ့ပေးပါအုံး….” လို့ ပွောရငျး ဒျေါစီစီလှိုငျရဲ့ ပေါငျတနျတဖကျကို ဆုပျကိုငျပွီး ပှတျ လိုကျတယျ ။ “ ဟိတျ..အိမျရောကျခါနီးပွီ…..နောကျမှကှာ…နျော…နျော..” ကိုစိုးမိုးက သကျပွငျးခရြငျး ကားကို ခွံထဲကို ထိုးကှေ့ ဝငျလိုကျပါတယျ………… ပွီး။
ဒေါ်စီစီလှိုင် အိပ်ရာက ထပြီး ရေချိုးခန်း ထဲကို ဝင်လိုက်တယ် ။ သွားတိုက်ရင်း ဝတ်ထားတဲ့ ညဝတ် ဝတ်ရုံကို ဖြေချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ တကိုယ်လုံးကို မြင်နေရတဲ့ ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ကြီးထဲမှာ အဝတ်မဲ့ နေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်မိတယ် ။ နို့ကြီး နှစ်လုံးက အိကျနေ ပေမယ့် လုံးဝန်းနေဆဲဘဲ ။ နို့သီးခေါင်း နီနီလေးတွေကလည်း တပ်မက်စရာ ကောင်းတုံးဘဲ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ နေခဲ့လို့ ဝမ်းပျင်သား ကလည်း ခပ်မို့မို့လေး ရှိနေပေမယ့် ကြည့် လို့ ကောင်းဆဲဘဲ ။ ခါးက သိပ် မသေးတော့ပေမယ့် တုတ်တုတ်ကြီးလည်း မဖြစ်သေး ။ တင်ပါးကြီးတွေကတော့ စွင့်ကား ထယ်ဝါနေဆဲဘဲ ။ ပေါင်ကြားနေရာက အမွှေးတွေက တော်တော် ထူနေပြီ ။ ရေချိုးရင်း အမွှေးတွေကို ကပ်ကြေးနဲ့ ပါးပစ်လိုက်တယ်။ မကြာခင် ထစ်ချုံးကို တနေရာရာမှာ လိုးခိုင်းတော့မယ် ။ ဒီအခါ သူ စောက်ဖုတ်ယက်ပေးမှာ သေချာတယ် ။
သူ စောက်ဖုတ်ယက်ရင် အနံ့အသက် ကောင်းစေဖို့ ဆပ်ပြာမွှေးမွှေးနဲ့ သေသေချာချာ ဆေးကြောလိုက်တယ် ။ ထစ်ချုံးနဲ့ ဘယ်နေရာမှာ သွား လိုးရမလဲ ခေါင်းထဲမှာ စဉ်းစားနေတယ် ။ ခေါင်းထဲမှာ ပေါ်လာတာက ဗိုလ်တထောင် ဖက်မှာ နေတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း လေးလေးနွယ် ရဲ့ တိုက်ခန်းလေး ပါ ။ လေးလေးနွယ်က သဘောကောင်းတယ် ။ တယောက်ထဲ နေတဲ့ အပျိုကြီး ။ စကားလည်းနည်း မိတ်ဆွေလည်း နည်းလို့ သူ့ကို အကူအညီ တောင်းရင် ရမယ် လို့ တွေးမိတယ် ။ ပက်ဂီဘမြင့်ကတော့ အပေါင်းအသင်းများ ပြီး အာချောင်တတ်လို့ စိတ်မချဘူး ။ လေးလေးနွယ်ကို ဖုန်းလှမ်း ဆက်လိုက်တော့ လေးလေးနွယ်က “ ရတာပေါ့ စီစီရယ်….အချိန်မရွေးပါ..ဒါပေမယ့် လေ..သူငယ်ချင်းက ကိုယ့်အခန်းမှာ ဘာလုပ်မလို့လဲ ဆိုတာလေးတော့ စပ်စုပါရစေ…” လို့ ရယ်ပြီး မေးလာ တယ် ။
သူက “ ကိုယ့်အိမ်က ချာတိတ် တယောက်ကို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးမလို့ပါ…” လို့ ဖြေလိုက်တယ် ။ လေးလေးနွယ်က “ သင် သူငယ်ချင်း…ကိုယ်ဖိရင်ဖိသာ အကောင်းဆုံး သင်ပေးလိုက်ပါ..မင်းလာရင် ကိုယ် အပြင် ထွက်ပေးမယ်…ကိုယ်လည်း တာမွေအိုးရှင်းမှာ ရှော့ပင်သွားစရာ ရှိလို့…” လို့ ပြောတယ် ။ အင်း…နေရာတော့ အိုကေသွားပြီ …။ ရေချိုးအပြီး ခါတိုင်းလို အကြာကြီး အလှထိုင် ပြင်မနေတော့ဘဲ ခပ်မြန်မြန်ဘဲ အဝတ်အစား ပွပွပါးပါးတွေကို ဆွဲ ဝတ်လိုက်ပြီး တိုက်ပေါ်က ဆင်းသွားလိုက်တယ် ။ တိုက်အရှေ့ အပေါက်ဝတည့်တည့်မှာ ထစ်ချုံး ကားရပ်ပြီး ကားဘေးမှာ ရပ်စောင့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။
အံမယ်..ဒီကောင်လေး..အဝတ်အစား သန့်သန့် နဲ့ ကြည့်ကောင်းနေတယ် ။ ရေမိုးချိုးထားပုံရတယ် ။ “ ထစ်ချုံး …” “ ဗျာ..ဒေါ်လေး …” “ဗိုလ်တထောင် ဖက်ကို လိုက်ပို့ကွာ..ဒေါ်လေး သူငယ်ချင်း အိမ်ကို….” “ ဟုတ်ကဲ့…ဒေါ်လေး..” ဒေါ်စီစီလှိုင် မကြာခင် ဖြစ်လာတော့မှာတွေကို ကြိုတင် စိတ်ကူးယဉ် စဉ်းစား တွေးတောနေရင်း ရင်တွေ တအား ခုံလာသည် ။ဒေါ်စီစီလှိုင် က ထစ်ချုံးနဲ့ မကြာခင် လိုးဖြစ်တော့မယ် ဆိုတာကို စဉ်းစားပြီး စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန် နိုးကြွနေပေ မယ့် ထစ်ချုံးကတော့ ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ အကြံအစည်ကို မသိသေး ။
စောသေးလို့ ကားပိတ်ဆို့တာတွေ မဖြစ်သေးဘူး ။ “ ထစ်ချုံး…” “ ဗျာ..ဒေါ်လေး …” “ မနေ့က ဟမ်ဘာဂါ ကောင်းလား….” “ ဟုတ်..အရမ်း ကောင်းတာဘဲ ဒေါ်လေး..ဟီး…တခါမှ မစားဘူးသေးဘူး..ကျေးဇူးပါ ဒေါ်လေး …” “ ဒီနေ့ မင်းကို အကောင်းစား တခု ထပ် ကျွေးအုံးမယ်ကွ..” “ ဟုတ်..ဒေါ်လေး….” ဗိုလ်တထောင်က ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ သူငယ်ချင်း လေးလေးနွယ်ရဲ့အိမ်ကို ရောက်တော့ လေးလေးနွယ်က အပြင်ထွက်နဲ့ အဝတ်အစားသစ်တွေနဲ အဆင်သင့် စောင့်နေပြီး…“ စီရေ..အေးအေးဆေးဆေး လွတ်လွတ်လပ်လပ် စိတ်တိုင်းကျသာ နေကြ…ပြန်ရင်လည်း တံခါးသာ ဆွဲပိတ်ခဲ့လိုက်…” လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ ထစ်ချုံးလည်းသက်သက်မြိုင်နဲ့ ရန်ကင်းတိုက်က သူ့သူငယ်ချင်း အိမ်ကို လိုက်သွားတာတဲ့အခါ ဖြစ်ပျက်တာနဲ့ တထပ်တည်း တူနေလို့ ဒေါ်စီစီလှိုင် သူနဲ့ လိုးကြဖို့ စီစဉ်ထားတာကို ရိပ်မိ သွားပါတော့တယ် ။
ကျေးဇူးရှင် ဘကြီးမြိုင်ရဲ့ ဇနီးမယား ဖြစ်လို့ အိမ်မှာ နေတဲ့အချိန် ဒေါ်စီစီလှိုင်ကို မပြစ်မှား မိရအောင် သတိထား ခဲ့တာ..။ အခုလည်း တဏှာထန်တဲ့လူတယောက် ဖြစ်ပေမယ့် ဒေါ်စီစီလှိုင်ကို တတ်နိုင်ရင် မလုပ်ချင်ဘူး ။ သို့ပေမယ့် ဒေါ်စီစီလှိုင်က “ ထစ်ချုံး….လိုက်ခဲ့…” ဆိုပြီး အိပ်ခန်းထဲကို ခေါ်သွားတဲ့အခါ ထစ်ချုံးရဲ့ စိတ်တွေ ဘလောင်ဆူ လှုပ်ရှားလာရပြီ ။ အိပ်ခန်းထဲကို သွားကြတဲ့အခါ သူက ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ အနောက်က လိုက်ရတော့ စွင့်ကားတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ လှုပ်တုန်တာကို မြင်ရတာ သူ့စိတ်တွေ ယိမ်းယိုင်ကုန်သည် ။
သူတို့ နှစ်ယောက်ထဲဘဲ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အသိကလည်း ထစ်ချုံးရဲ့ စိတ်တွေကို ဖေါက်ပြားလာစေသည် ။ အိပ်ခန်းထဲကို ရောက်တော့ ဒေါ်စီစီလှိုင်က ထစ်ချုံးဖက်ကို လှည့်လိုက်ပြီး “ ထစ်ချုံး….မင်းကို ဒေါ်လေး ပြောပြ ချင်တာတွေ ရှိတယ်ကွာ..ဒါကြောင့် မင်းကို ဒီကို ခေါ်လာတာ…” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်နဲ့ သူနဲ့ အရမ်းကို နီးကပ်နေတယ် ။ “ မအိုက်ဘူးလားကွာ..မင်း အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်ပါလား…” လို့ လေသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်လို့ ထစ်ချုံးလည်း ဝတ်ထားတဲ့ စပို့ရှပ်ကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်က “ အင်း..မင်းလေးက တော်တော် ယောက်ျား ပီသပါလား…” လို့ စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်ရင်း ပြောလိုက်ပြီး ထစ်ချုံးရဲ့ ရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့ ဖွဖွလေး ပွတ်လိုက်တယ် ။ ထစ်ချုံးလည်း ကြက်သီးတွေ ထပြီး ပေါင်ကြားက လီးလည်း ငေါက်ကနဲ ထလာရတယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်က “ အောက်က ပုဆိုးကိုပါ ချွတ်လိုက်ကွာ…” လို့ လေသံလေးနဲ့ ထပ် အမိန့်ပေးတယ် ။
ထစ် ချုံးလည်း ချက်ချင်းဘဲ ပုဆိုးကို ချွတ်ချပစ်လိုက်တယ် ။ အတွင်းခံဘောင်းဘီဘဲ သူ့တကိုယ်လုံးမှာ ကျန်တော့ တယ် ။ ဖုဖေါင်း ငေါနေတဲ့ ပေါင်ကြားက အရာကြီးကို သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်ပြီး “ မင်း မနက်က ရေ ချိုးခဲ့သေးလား…” လို့ မေးပြန်လို့..“ ဟုတ်..ချိုးပါတယ် ဒေါ်လေး..” လို့ ထစ်ချုံး ဖြေတယ် ။ “ မင်း အန်ဒါဝဲ ကိုပါ ချွတ်လိုက်…” လို့ ထပ်ပြောလို့ မဆိုင်းမတွ အမိန့်ကို နာခံလိုက်တယ် ။ တကိုယ်လုံး အဝတ်မဲ့နေပြီ …။ ကိုယ်လုံးတီးကြီး ရပ်နေတဲ့ ထစ်ချုံးကို ဒေါ်စီစီလှိုင် ခြေဆုံး ခေါင်းဆုံး ကြည့်နေပုံက ကျွန် ပိုင်ရှင်ခေတ်က သူဌေးတွေက ကျွန်ဝယ်တဲ့နေရာမှာ သေသေချာချာ စစ်ဆေး သုံးသပ်နေတဲ့ ပုံလိုပါဘဲ ။ လီးတန်ငေါငေါကြီးကို ကြည့်ပြီး ဒေါ်စီစီလှိုင် တံတွေး မြိုချလိုက်တယ် ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ လီးကြီးပါလား …။
လင်ဖြစ်သူရဲ့ လီးတိုလေးနဲ့ တခြားစီဘဲ…အင်း..စောက်ဖုတ်ထဲက တအား ယားနေရပြီ…..။ “ မင်းရဲ့ ဘကြီးမြိုင်က ခါးနာတဲ့ ဝေဒနာကြောင့် ဒေါ်လေးကို ပစ်ထားတာ ကြာပြီကွ….ဒေါ်လေးနဲ့ မအိပ်တော့ဘူး …ဒေါ်လေးလည်း ယောက်ျား အပေါ်ကို သစ္စာမဖေါက်ချင်တာနဲ့ ကြိတ်မှိတ်ပြီး နေခဲ့တာ ကြာပါပြီကွာ…အခုတော့ ဒေါ်လေး မအောင့်အည်းနိုင်တော့ဘူး…မင်း ဒေါ်လေးကို ဆန္ဒဖြည့်ပေးပါလားဟင်..” ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ လက်တဖက်က ထစ်ချုံးရဲ့ လီးတန်ကြီးဆီကို ရောက်လာတယ် ။ ထစ်ချုံးလည်း ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိဘူး ။ ဘကြီးမြိုင်ရဲ့ သမီးနှစ်ယောက်လုံးကို သူ လိုးခဲ့ပြီးပြီ ။ အခု သူ့ဇနီး ကို ထပ် လိုးရမယ် ဆိုရင် သူ ကမ်းကုန်နေပြီ ။ “ မသင့်တော်ဘူး ထင်တယ် ဒေါ်လေးရယ်…ဘကြီးမြိုင်က ကျနော့်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် တယောက်ပါ…ဒေါ်လေးကို ကျနော့် အဒေါ်အရင်း တယောက်လို သဘောထားခဲ့တာပါ….” ထစ်ချုံးပြောနေတဲ့ အချိန် ဒေါ်စီစီလှိုင်က သူ့လီးတန်ကို ပွတ်သပ်နေတယ် ။
သည် အထိအတွေ့ကြောင့် ထစ် ချုံးရဲ့ သွေးသားတွေ ထကြွလာတယ် ။ လီးကြီးက မတ်မတ်ထောင်လာတယ် ။ တောင်လာတယ် ။ “ ထစ်ချုံး…ကူညီပါကွာ..မင်း ဒေါ်လေးကို ကူညီစမ်းပါ…..” ဒေါ်စီစီလှိုင်က ထစ်ချုံးရဲ့ လီးကို လက်တဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင် နောက် လက်တဖက်နဲ့ ထစ်ချုံးရဲ့ လက်ကို ဆွဲ ပြီး ကုတင်ဆီကို ခေါ်သွားတယ် ။ ထစ်ချုံးလည်း သူ့လီးကို ဆုပ်ကိုင်ခံထားရတာကြောင့် ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်းထပြီး စိတ်တွေ ကြွထန်လာ တယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်က ထစ်ချုံးကို ကုတင်ပေါ်က မွေ့ယာထူထူကြီးပေါ်ကို တွန်းချလိုက်တယ် ။ ပက်လက်ကျ သွားတဲ့ ထစ်ချုံးလည်း အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ပစ်နေတဲ့ ဒေါ်စီစီလှိုင်ကို ငေးကြည့်နေမိတယ် ။
ဖြူဖွေးတောင့်တင်းတဲ့ ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်တွေက ထစ်ချုံးရဲ့ စိတ်ဆင်ရိုင်းကို သတိ ဆိုတဲ့ ချွန်းနဲ့ အုပ်လို့ မရတော့ဘူး ။ အထူးသဖြင့် ပေါင်ကြားက မို့ဖေါင်းနေတဲ့ အာပုံကြီးကို တွေ့လိုက်ရလို့ ။ အလတ်ကြီး ရှိသေးတဲ့ ဒေါ်စီစီလှိုင်ကို လိုးဖို့ သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ ကြီးမား ဆူကြွနေတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးက သူ့ကို ကိုင်ညှစ်ပါတော့..စို့ပါတော့လို့ ဖိတ်ခေါ်နေကြသလိုဘဲ ။ ကုတင်ပေါ် တက်လာတဲ့ ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ နို့ကြီးတလုံးကို လက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ကျန်တဲ့ တလုံးကို ပါးစပ် နဲ့ ငုံစို့လိုက်နဲ့အခါ ဒေါ်စီစီလှိုင်လည်း အရမ်း ကျေနပ်သွားတယ် ။
မွေ့ယာကြီးပေါ် ပက်လက် အိပ်ချလိုက် တဲ့အချိန် ထစ်ချုံးက ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးလှလှ နှစ်ချောင်းကို ဆွဲကားလိုက်ပြီး မို့ဖေါင်းတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်စီစီလှိုင်က “ ဘာကြည့်တာလဲ..” လို့ မေးတယ် ။ “ ဒေါ်လေး စောက်ဖုတ်က လှလွန်းလို့ပါ..” လို့ ထစ်ချုံးက ဖြေလိုက်ပြီး ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ စောက်ဖုတ်မှာ မျက်နှာအပ် လိုက်ရင်း နမ်းရှုံ့ပါတော့တယ် ။ “ အို..ထစ်ချုံး..ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ …မင်း..မင်း မရွံဘူးလားဟင်….” လို့ မေးပြီး ထစ်ချုံးရဲ့ ခေါင်းကို တွန်းပစ် တယ် ။ သို့ပေမယ့် ထစ်ချုံးက ဖင်တုန်းကြီးတွေကို အတင်း ဆုပ်ညှစ်ကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို တအား စုတ် တအား ယက်တော့တာဘဲ ..။ “ အို..အား……အမလေး…အီး…..ဟင့်ဟင့်…….” ဒေါ်စီစီလှိုင် တသက် တကိုယ် မရဘူးတဲ့ အထိအတွေ့တွေကို ရသွားလို့ တအား ထူးဆန်းနေတယ် ။ လင်ဖြစ်သူ တခါမှ မလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ စောက်ပတ်ယက်စုတ်တာကို သည်ကောင်လေးက လုပ်ပေးလိုက်လို့ ။
ထစ်ချုံးရဲ့ လျာက စောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးသွင်း မွှေနောက်ပေးတာကြောင့် ဒေါ်စီစီလှိုင်လည်း ဖင်ကြီးတွေ လှုပ်ခါပြီး တအင်းအင်းနဲ့ သဘောကျနေတယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင် တယောက် သူ့ဘာဂျာကို ကြိုက်တယ် ဆိုတာကို သိရတော့ ထစ်ချုံးလည်း ကြိုးစားပမ်းစား မှုတ် ပေးတော့တာဘဲ ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်ကို လန့်တဲ့ အရှိန်ကြောင့် စစချင်းမှာ မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် ဒေါ်စီစီလှိုင်က“ ငါ့နို့တွေကိုလည်း ညှစ်ပေးလေ..ထစ်ချုံး ” လို့ ပြောလာတာကြောင့် သူ့လက်တွေလည်း ပို ရဲတင်း သွက်လက်လာတယ် ။ တင်းမာလုံးဝန်းတဲ့ ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို လက်လှမ်းပြီး ကိုင်နယ်ပေးရင်း စောက်ဖုတ် ကို ဖိဖိ ယက်ပေးတယ် ။ “ အား..ဟင်း..ဟင်း….အင်ဟင်….ကောင်း..ကောင်းတယ်…ယက်..ယက်…..ယက်…..အမလေး….ကောင်းလိုက်တာ..” ဒေါ်စီစီလှိုင် စောက်ဖုတ်ယက် ခံလို့ ကောင်းလွန်းသလို စောက်ဖုတ်ထဲကလည်း လှိုက်ယားနေပြီ ။
တခုခုနဲ့ ထိုး ထည့် ဖြေဖျောက်မှ ပြေပျောက်ရမယ့် အခြေအနေမှာ ထစ်ချုံးရဲ့ စံချိန်မှီ လီးတန်ကြီးကို အမြန် ထိုးသွင်းစေချင် လှပြီ ။ “ ထစ်ချုံး..တော်တော့ကွာ….ဒေါ်လေးကို လုပ်ပေးတော့…အရမ်း လိုချင်နေပြီကွာ…..” လို့ ထစ်ချုံးကို ပြောလိုက် ပေမယ့် ထစ်ချုံးက ယက်တာ အရှိန်ရနေတော့ ရုတ်တရက် ရပ်မပစ်လိုက်နိုင်ဘူး ။ စောက်ဖုတ်နဲ့ ကပ်နေတဲ့ ဖင်စအိုပေါက် ညိုညိုလေးကိုပါ သူ့လျာနဲ့ ထိုးကလိပေးနေတယ် ။ တအား ခံချင်လွန်းနေလို့ ဒေါ်စီစီလှိုင်လည်း ထစ်ချုံးခေါင်းကို တွန်းပစ်လိုက်ပြီး…“ တော်ပြီဆို..ငါ ယားလှပြီ….မင်း လိုးပေးပါတော့ကွာ…” လို့ စိတ်မရှည်တော့သလို ပြောလိုက်တယ် ။
ထစ်ချုံးလည်း..“ ဒေါ်လေးကို ကောင်းစေချင်လို့ပါ…ဆောရီးဘဲ..” လို့ ပြောရင်း ဒေါ်စီစီလှိုင်ကိုယ်ပေါ်ကို ခွတက် လိုက်ပါတယ် ။ ပေါင်တန်ဖြူဖြူနှစ်ချောင်းကို ဘေးကို ဖြဲကားလိုက်ပြီး အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတဲ့ စောက်ဖုတ်မှာ သူ့ လီးထိပ်ကို တေ့လိုက်တယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်လည်း ယားလွန်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို လီး အမြန်ဝင်ရေး စိတ်စော နေတယ်။ ထစ်ချုံးလည်း ဒီလောက်ယားနေတဲ့ စော်ကြီး အပီကို လိုးထည့်အုံးမယ် လို့ စိတ်ထဲ ကြုံးဝါးပြီး သူ့လီး ကို ဖိသွင်းလိုက်တယ် ။ အရည်တွေ ရွှဲနေတာကြောင့် ခဲခဲယဉ်းယဉ်း မရှိဘဲ လီးကြီး အဖုတ်ထဲ ဝင်သွားပေမယ့် အသက်၅၀ အရွယ် အပျိုမနှစ်ယောက်ရဲ့ အမေရဲ့ စောက်ဖုတ်က တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ရှိနေတာကို သူ အံ့လည်း သြ သဘောလည်း ကျသွားရတယ် ။
ဘကြီးမြိုင်နဲ့ မလိုးတာ ကြာလို့ စောက်ဖုတ်လည်း အခုလို ကြပ်သွားပုံ ရတယ် ။ ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုတောင်းတဲ့ အသွင်းအနုတ်လေးတွေနဲ့ စလိုက်တယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင် တဟင်းဟင်းနဲ့ သဘောကျနေတယ် ။ သူ့ကို ပြန်ဖက်သိုင်းပြီး…“ အင်..အင်..ကောင်းတယ်…ရတယ်…လုပ်..လုပ်…” လို့ မျက်လုံး မှိတ်ပြီး ပြောနေတဲ့ ဒေါ်စီစီလှိုင်ကို စချင်နောက်ချင် လာတာနဲ့“ ဘာလုပ်ရမှာလဲ ဒေါ်လေး…” လို့ မေးလိုက်တဲ့ အခါ ဒေါ်စီစီလှိုင်က “ မင်းက သိရဲ့သားနဲ့ကွာ..ငါ့ပါးစပ်က ထွက်တာကို ကြားချင်တယ်ပေါ့လေ..” လို့ မျက် စောင်းလေး ထိုးလိုက်ပြီး ပြောတယ် ။ “ ဟုတ်တယ်..ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ..” လို့ ထစ်ချုံးက နို့ကြီးတလုံးကို ကိုင်ဆုပ်ရင်း မေးလိုက်ပြန်တယ် ။ “ လိုးပေး..လိုးပေးဖို့ ပြောနေတာ..မင်းရဲ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ ဒေါ်လေးစောက်ပတ်ကို လိုးပေးပါလို့…” ဖြေရင်း ဒေါ်စီစီလှိုင်လည်း အောက်ကနေ ဖင်ကြီးတွေကို လှုပ်ခါရင်း ကော့ပေးလိုက်တယ် ။
ထစ်ချုံးလည်း ကံကောင်းလှစွာနဲ့ ဘကြီးမြိုင်ရဲ့ အိမ်က မိန်းမတိုင်းကို လိုးခွင့်ရပြီး ဆက်တိုက် လိုးနေရလို့ “ ငါးသိုင်းများတော့ ဟင်းဟုန် ” ဆိုသလို ရိုးအီလာရတယ် ။ သို့ပေမယ့် ဒေါ်စီစီလှိုင်နဲ့ လိုးတာက ပထမဆုံး အကြိမ် ဖြစ်ပြီး ဒေါ်စီစီလှိုင်က သည်အိမ်က အဓိက ပါဝါအကြီး ဆုံး လူ ဖြစ်တာကို သိလို့ သူ့ကို ခိုက်သွားကြိုက်သွားအောင် လိုးပေးရမည် လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ကျကျနန လိုး ပေးပါတော့တယ် ။ အရင်ကလောက် ကြောက်မနေတော့ဘဲ ပက်လက် တက်မှောက် လိုးပေးအပြီး ဖင်ကုန်းခိုင်း လိုက်တယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်လည်း ကိုယ်မွေးထားတဲ့ ချာတိတ်က ကိုယ့်ပြန်ခိုင်းနေပြီ ဆိုတာကို သိလိုက်ပေမယ့် သူက ကောင်းကောင်း လိုးပေးနေတာမို့ သူ့အလိုကို လိုက်တဲ့ အနေနဲ့ ဖင်ထောင်ပြီး ကုန်းပေးလိုက်တယ် ။ စိတ်ထဲမှာလည်း ဖင်ကုန်းပြီး ခံရတာ စိတ်တွေ ပို ကြွထန်သလို ခံစားရလို့ ။ ထစ်ချုံး အပီကိုင် အပီကြုံးပြီ ။
ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ ဖင်တုန်းကြီးတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖြဲရင်း စအိုပေါက် နီညိုညို လေးကို ငုံ့ကြည့်ရင်း စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဆက်တိုက် ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ထည့်တယ် ။ “ အား….အား….” တဖတ်ဖတ် အသံတွေ နဲ့ ညည်းသံအော်သံတွေ ဆူညံနေတယ် ။ “ ကောင်းလားဟင်…” “ ကောင်းတယ်..လိုး…လိုး…ဆောင့်..ဆောင့်ကွာ..တအား..တအားဆောင့်ပေး…..” လိုးသူ ခံသူ အသံတူနေတယ် ။ သူအလိုးကောင်းသလို ခံနေတဲ့ ဒေါ်စီစီလှိုင်ကလည်း ဖင်ကြီးတွေကို ကော့ပစ် ပြီး ခံနေတယ် ။ လီးကြီး ကြုံးဆောင့်နေတာတွေကိ ခံယူနေတယ် ။ အားကုန် ဆက်တိုက် ဆောင့်ပေးတာ သုတ်ရည်တွေ စောက်ခေါင်းထဲကို ပန်းထုတ်ပစ်မိပြီး ပြီးသွားရတယ် ။ “ ဒေါ်လေးရော ပြီးရဲ့လားဟင်…”လို့ မေးမိတော့..“ ပြီးတာမှ နှစ်ခါတောင်…” လို့ မောဟိုက်တဲ့ လေသံနဲ့ ဒေါ် စီစီလှိုင်က ဖြေတယ် ။ ထစ်ချုံး တကိုယ်လုံးလည်း ချွေးတွေ ရွှဲရွှဲစိုနေတယ် ။
“ မောသွားလား….” “ ဟင့်အင်း….” “ မင်း တော်တော် အားကောင်းတာဘဲ….ဟင်း….” “ ဒေါ်လေး ကြိုက်လား….” “ အင်း….ကြိုက်တယ်….” “ ဒေါ်လေး….လိုချင်တဲ့အချိန် ပြောပါ..ကျနော် လုပ်ပေးမယ်…” ဒေါ်စီစီလှိုင် ခေါင်းညှိမ့်ပြပါတယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင် သည် ထမိန်ရင်လျားနဲ့ ထစ်ချုံးကို ကျောခိုင်းပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ တစောင်းလေး လှဲလျောင်းနေသည် ။ အင်္ကျီပြန်မဝတ်သေးပုံထောက်တော့ ငါနဲ့ နောက်တချီ နောက်တကြောင်းလောက် ထပ်ဆွဲချင်သေး တဲ့ ပုံ ရှိတယ် လို့ ထစ်ချုံး စိတ်ထဲမှာ တွေးနေတယ် ။ လိုတာ မရရှာတဲ့ ဒေါ်စီစီလှိုင်ကို သူ ဆန္ဒဖြည့်ဆည်း ပေးချင်မိတယ် ။ ဘကြီးမြိုင်နဲ့ ဘယ်လို မျက်နှာချင်း ဆိုင်ရမယ်တော့ မသိဘူး ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ ကပ်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်လိုက်တယ် ။ “ ကျနော် နှိပ်ပေးရမလားဟင်…” လို့ ခပ်တိုးတိုး မေးလိုက်တယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်ဆီက “ အင်း…”လို့ တိုးတိုး လေး ဖြေလိုက်သံကို သူ ကြားလိုက်ရလို့ အဝတ်မဲ့နေတဲ့ ပုခုံးသားတွေကို သူ့လက်နဲ့ ခပ်ဖွဖွ စ နှိပ်ပေး လိုက်တယ် ။
“ ထစ်ချုံး…” “ ဗျာ….” “ မင်းနဲ့ ငါ ကိစ္စ မင်း နုတ်လုံမှာလား…” “ ဟုတ်..ကျနော့်အတွက် စိတ်ချပါ …လုံပါတယ်…” “ အေး..ဟိုကောင်..စိုးမိုးကို မသိစေနဲ့နော်..ဒီကောင်က ငါ့ကို ကြံချင်နေတာ..သူက မင်းဘကြီးမြိုင် နဲ့ငါ မအိပ်ကြဘူး ဆိုတာ သိတယ်…ဟင်း..လူလည်…ဒီကောင်….” “ ကျနော် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါဘူး..ဂတိပေးပါတယ်…” “ အင်း….ဟုတ်ပြီလေ….အိမ်မှာတော့ မင်းနဲ့ ငါ ခပ်တန်းတန်းဘဲ နေကြမယ်..သိလား..လူတွေရှေ့…” “ ဟုတ်..ဒေါ်လေး…” သူ့လက်ဖဝါးက ဒေါ်စီစီလှိုင့် ကျောပြင်တလျောက် ပွတ်သပ်ပေးနေတယ် ။ ထမိန်က နဂိုထဲက လျော့ရည်းရည်း နဲ့ ဆိုတော့ သူ ဆွဲချလိုက်ပြီး ခါးအထိ ဆက် ပွတ်ပေးနေတယ် ။ ဝင်းမွတ် ဖြူဖွေးတဲ့ အသားနဲ့ အထိအတွေ့ တွေက သူ့စိတ်တွေကို ပြန်နိုးထလာစေတော့ သူ့ပေါင်ကြားက ဖွားဖက်တော် လည်း တင်းမာလာရပြန်ပြီ ။
ခါးကနေ အောက်ဖက် ဆက် ဆင်းတော့ စွင့်ကားဝိုင်း နေတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေဆီကို သူ့လက် ရောက်သွားတယ်။ ဒေါ်စီစီလှိုင် သူ့အကိုင်အတွယ်တွေကို မငြင်း မတားဘူး ။ သဘောကျ ကျေနပ်နေတဲ့ပုံ ။ တင်ပါးကြီးတွေကို ပွတ်ပေးနေရာက လက်နဲ့ ဆုပ်ညှစ်လိုက်မိတယ် ။ ဟင်း….ပေါင်ကြားက ငပဲ ထန်းကနဲ ထောင်သွားတယ် ။ တင်စိုင်နှစ်လုံးရဲ့ ကြားထဲကို လက်ချောင်းတွေ ရောက် သွားတယ် ။ စအိုပေါက်တွန့်တွန့်လေးကို လက်ညှိုးနဲ့ ကလိလိုက်တော့ “ အို့..” ဆိုတဲ့ အသံလေး ထွက်လာ တယ် ။ ဆက် ပွတ်ပေးနေမိတဲ့အချိန် ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ လက်တဖက်က နောက်ပြန် လာစမ်းတယ် ။ သူ့ပေါင်တန် တွေ ကြားထဲကို စမ်းမိသွားတော့ သူ လီးတောင်နေတာ သိသွားပြီး..ဒေါ်စီစီလှိုင် ရယ်တယ် ။ “ ကြည့်စမ်း..မင်း ပြန်မာနေပြီ…မင်း သိပ် အားကောင်းတဲ့ ကောင်လေး…” လို့ ပြောလိုက်ရင်း သူ့ဖက်ကို လှည့် လာတယ် ။ ထမိန်က ပြေကျနေတော့ နို့ကြီး နှစ်လုံး ပေါ်နေတယ် ။ နို့ကြီးတွေကို အငမ်းမရ ကိုင်ဆုပ်လိုက် မိတယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်က “ ကြိုက်လား…” လို့ ပြုံးပြီး မေးလိုက်တယ် ။
“ ကြိုက်တယ်…ဒေါ်လေး..ကျနော် စို့လို့ရမလား….” လို့ ခွင့်တောင်းသလို မေးလိုက်တော့..“ အင်း…” လို့ ဖြေတာ နဲ့ နို့ကြီးတလုံးက နို့သီးဖုလေးကို စပြီး စို့လိုက်တယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ မျက်လုံးတွေ မှိတ်သွားတယ် ။ နို့စို့ရင်း ထမိန်ကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားတဲ့ ဒေါ်စီစီလှိုင်က “ ရှက်တယ်ကွာ..” ဆိုပြီး ပေါင်တန်တွေကို စေ့လိုက်ပြီး လက်နဲ့ကာ ဖို့ လုပ်ပေမယ့် သူက လက်တွေကို ဆွဲဖယ်လိုက်သလို ပေါင်တန်တွေကို ဘေးကို ဖြဲကားပစ်လိုက်တယ် ။ သူ့ ခေါင်း သူ့မျက်နှာကို စောက်ဖုတ်ကြီးဆီကို တိုးကပ် အပ်လိုက်ပြီး စနမ်းရှုံ့တော့ “ ဟဲ့ အို….ကဲလိုက်တာ..” လို့ ပြောသံ ကြားလိုက်ရပေမယ့် ပြုံးစိစိနဲ့ ကျေနပ်နေတဲ့ ပုံကိုတွေ့ရလို့ စောက်ဖုတ် အကွဲအတိုင်း လျာနဲ့ စုံချီ ဆန်ချီ ယက်ပေးလိုက်ပါတော့တယ် ။
စောက်စိကို အပီ ကလိပေး သလို ဖင်ပေါက်ညိုညိုလေးကိုပါ လျာနဲ့ ကလိပေးလိုက်တယ် ။ သည် တချီမှာတော့ ထစ်ချုံးလည်း ပို ရဲတင်းလာသလို ဒေါ်စီစီလှိုင်ကလည်း ပို ပွင့်လင်းလာတယ် ။ ရဲလာတယ်။ ထစ်ချုံး ဘာဂျာကိုင်ပြီးတဲ့နောက် “ မင်းကို ဘာလုပ်ပေးစေချင်လဲ…” လို့ မေးလာတယ် ။ “ ပုလွေကိုင်ပေးမလားဟင်..” လို့ သူ အရဲစွန့်ပြီး မေးကြည့်လိုက်တယ် ။ “ အင်း..လုပ်ပေးမယ်လေ…” ဒေါ်စီစီလှိုင်က သူ့ကို ပက်လက် အိပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး မတ်မတ်ထောင်နေတဲ့ လိင်ချောင်းကို ငုံ့စုတ်လိုက်တယ် ။ ထစ်ချုံး အဖို့ အိပ်မက် တခုလိုဘဲ ဖြစ်နေတယ် ။ သူတို့အိမ်က အရှင်သခင် ဒေါ်စီစီလှိုင်က သူ့ဒုတ်ကို အရင်းပိုင်းကနေ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ကျကျနန စုတ်ပေးနေလို့ ။ ဒါကြောင့် လောကမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ မရှိ..မဖြစ်သေးတာဘဲ ရှိမယ် ဆိုတဲ့ စကား ရှိတယ်လေ ။ မထင်တာတွေ ဖြစ်ပျက်နေပြီ ။
လီးကို အားရပါးရ စုတ်နေတဲ့ ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို သူ မသိမသာ ကော့ကော့ပြီး ထိုညှောင့်မိနေတယ်။ သူ့ေ၈ွးစိနှစ်လုံးကိုလည်း ဒေါ်စီစီလှိုင်က ဆုပ်နယ်ကစားနေတယ် ။ တော်တော်ကြာအောင် စုတ်ပေးပြီးမှ လီးကို ပါးစပ်ကနေ ချွတ်ခွာလိုက်ပြီး..“ ကောင်းလား…” လို့ မေးတယ် ။ “ အရမ်းကောင်းတာဘဲ ဗျာ….” လို့ ဖြေလိုက်တ့ အချိန် ဒေါ်စီစီလှိုင်က သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို ခွတက်ထိုင်လိုက်တယ် ။ အိုး…အပေါ်က လုပ်မယ့်သဘော ..။ သည် ဒုတိယ တချီမှာတော့ ဖုတ်ပူမီးတိုက် မဟုတ်တော့ဘဲ အရသာခံပြီး ပုံစံ အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး လိုးကြတယ် ။ တော်တော့်ကို ရင်းနှီးသွားရပြီး အရှက်လည်း ကုန်သွားတယ် ။ စိတ်ကြိုက် လိုးဖြစ်ကြတယ်လို့ ပြောရမယ် ။
အပြန်ခရီးမှာ ကားပေါ်မှာ ဘကြီးမြိုင်ရဲ့ အကို ယူအက်စ်က ဘကြီးခိုင်တို့သဘက်ခါဆို ရန်ကုန်ကို ရောက်တော့ မယ် လို့ ဒေါ်စီစီလှိုင်က ပြောပြတယ် ။ သူတို့ လာမယ် ဆိုပြီး ထစ်ချုံးတို့ လိုတာတွေ ပြင်ဆင် ထားခဲ့တာ တော်တော် ကြာနေပါပြီ ။ အိမ်ရောက်တော့ ထစ်ချုံး သူ့တန်းလျားကို ပြန်ရောက်ပြီး ရေချိုးဖို့ ပြင်နေခိုက် ဒေါ်သိန်းက ဘကြီးမြိုင် ခေါ်တယ် လို့ လာပြောလို့ ရင်ထဲ ထိတ်သွားတယ် ။ ..ငါနဲ့ သူ့မိန်းမ ဖြစ်တာများ သိသွားလေသလား…ဆိုပြီး စိတ်တအား ပူသွားတယ် ။ ကတုန်ကရင်နဲ့ ဘကြီးမြိုင် ရှိတဲ့ တိုက်ကြီး အပေါ်ထပ်ကို ထစ်ချုံး တက်ခဲ့လိုက်တယ် ။ပဲခူးမှာ တုံးက ကိုစိုးမိုးဟာ ဘကြီးမြိုင်..ဘကြီးခိုင်တို့ လင်မယား နှစ်စုံကို ဘုရားဖူး ဈေးဝယ် လိုက်ပို့ပေးရတဲ့ အချိန် ဘကြီးမြိုင်ရဲ့ မိန်းမ ဒေါ်စီစီလှိုင်နဲ့ရော ဘကြီးခိုင်ရဲ့ မိန်းမ ဒေါ်စတယ်လာနဲ့ရော နီးနီးကပ်ကပ် လက်ပွန်းတတီး နေခဲ့ ဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့ အချိန် ဒီကတော်ကြီး နှစ်ယောက်က အထာပေးသလိုလို ညုသလိုလို နဲ့ သူ့စိတ်တွေကို ထကြွစေခဲ့ပေမယ့် ကိုစိုးမိုးလည်း မိသွားရင် အကျင်းခံရမယ့်အပြင် မော်စကိုကိုပါ ရောက် သွားမှာမို့ စိတ်ကို ထိန်းပြီး ငြိမ်ကုပ်နေခဲ့တယ် ။ တကယ်တမ်း တီးချင်တာက မိုးမိုးခိုင်လေး ။
ဖြူဝင်း တောင့်တင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးက လှလွန်းလို့ စိတ်ကူးနဲ့ အဝတ်တွေ ချွတ်ကြည့်နေမိတယ် ။ နို့ကြိးတွေက ဘယ်လိုနေမှာ…စောက်ဖုတ်လေးက ဖေါင်းအိနေမှာ..စသဖြင့် စိတ်ကူးတွေ ယဉ်နေမိတော့ လီးက မာကျော တောင်မတ်လာတယ် ။ ပုဆိုးပေါ်ကဘဲ လီးကို လက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်မိလိုက်တယ် ။ အင်း..မိုးမိုးခိုင်ကို ဗျင်းရရင် ကောင်းလိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်း ….လို့ စိတ်နဲ့ မှန်းဆရင်း လီးကို ပွတ်တိုက် ကွင်းထု မိနေတယ် ။ မိုးမိုးခိုင်လည်း စီးကရက် သောက်ပြီးသွားလို့ တိုက်ဖက်ကို ပြန်သွားလိုက်တဲ့ အချိန် ကျောဖက်ကနေ တင်ပါးအိ အိတင်းတင်းတွေ တုန်ခါ လှုပ်သွားတာတွေကို မျက်လုံးကြီး အပြူးသားနဲ့ စိုက်ကြည့်နေမိတယ် ။
ဟင်း…ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖင်ကြီးတွေ …အမလေး….လေးဖက်ထောက် လိုးလိုက်လို့ကတော့ အီဆိမ့်နေမှာဘဲ ။ ဒီအချိန်မှာ နော်တုလု သူ့အခန်းကို ရောက်လာတယ် ။ “ ကိုစိုးမိုး…အန်တီလှိုင်…ခေါ်တယ် …” “ ဟေ….ဘာတဲ့လဲ..ခုဘဲ ခရီးဝေးက ပြန်ရောက်တာ..ဘယ်ထွက်ကြအုံးမလို့လဲဟာ….” ကိုစိုးမိုးသည် မိုးမိုးခိုင် ဖင်တွေကို ငေးမောပြီး မှန်းပြီး ကွင်းကိုင်နေတာမို့ ရုတ်တရက် စိတ်တိုသွားတယ် ။ “ ဒါတော့ ကျမလည်း မသိဘူး…သူ့သွားမေးချည်…” လို့ နော်တုလုက မျက်စောင်းထိုးရင်း ခပ်စွာစွာ ပြန်ပြော လိုက်တာကို သူ ခံရတယ် ။ နော်တုလုကလည်း အရင်ထက် နို့ကြီးတွေ ပိုထွားလာသလိုဘဲ ။ ဒီကောင်မကို ဆွဲ လိုးပစ်လိုက်ရင် ကောင်းမယ် လို့ သူ့စိတ်ရိုင်းတွေက ကြံစည်မိလိုက်တယ် ။ သို့ပေမယ့် သူ့အခန်းပေါက်ဝ မှာ ဒေါ်စီစီလှိုင် ကိုယ်တိုင် ရောက်နေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ ကိုယ်ရှိန်သတ် လိုက်ရတယ် ။
“ စိုးမိုး….ဘာအပျင်းကြီးနေတာလဲ…ထ…..ထ….ငါ အပြင်ထွက်မလို့ …” ဒေါ်စီစီလှိုင်က ခပ်မာမာ ခပ်စွာစွာနဲ့ ပြောလိုက်လို့ သူ ကဗျာကယာ ထလိုက်ရတယ် ။ သူ့ပုဆိုးအောက်က ငပဲ တန်ကြီးကတော့ မတ်နေဆဲ ။ နော်တုလုလည်း တိုက်ဖက်ကို ပြန်လျှောက်သွား နေတယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်လည်း ကိုစိုးမိုးရဲ့ ပလေကပ် ပုဆိုး အောက်က လတန်ချောင်းကြီး မာမတ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ သေသေချာချာ စူးစိုက် ကြည့်နေတယ် ။ “ ဟဲ့..စိုးမိုး..အဲဒါက ဘယ်လို ဖြစ်တာတုန်း…” “ ဗျာ….ကျနော် ဘာလုပ်မိလို့လဲဟင်….” “ အံမယ်..မင်း ဘာဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ မင်း အသိဆုံးဘဲ…မင်း ပေါင်ကြားက ထောင်နေတာကို မေးနေတာ..” “ အဟီး…ဆောရီးဘဲ ဒေါ်လေး . . ကျ..ကျနော်…ကျနော် … ” “ ဟင်း..ရုပ်ကိုက …ကဲ..ကဲ..ငါ ဈေးသွားစရာ ရှိလို့..လိုက်ပို့စမ်း…” “ ဟုတ်ကဲ့…ဒေါ်လေး….” ဒေါ်စီစီလှိုင်သည် ကျောက်စိမ်းရောင် အသားပျော့ပျော့ အထက်အောက် ဆင်တူ ဝတ်ထားတယ် ။
အသားဖွေးဖွေး ဖြူသူမို့ သူဝတ်ထားတဲ့ အတ်အစားနဲ့ လိုက်ဖက် ကြည့်ကောင်းလှတယ် လို့ ကိုစိုးမိုး ထင် မိတယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်နဲ့ အိမ်ကနေ ထွက်ခဲ့ရတဲ့အခါ လမ်းမပေါ် ရောက်တာနဲ့ ကိုစိုးမိုးက “ ဒေါ်လေး..ဘယ်ကို မောင်း ရမလဲ..” လို့ မေးလိုက်တယ် ။ “ မင်းနဲ့ စကားပြောစရာတွေ ရှိတယ်..စိုးမိုး..တနေရာရာကို သွားပြောရအောင်…” “ ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်လေး…ဘယ်လိုနေရာကို မောင်းရမလဲဟင်…” “ ဟိုတယ် တခုခုပေါ့ကွာ…နာရီပိုင်း ငှားတဲ့ နေရာ တခုခုပေါ့..” ကိုစိုးမိုး သဘောပေါက်ပြီ ။ ရင်တွေလည်း အခုံမြန်လာသည် ။ ငါတော့ ကံကောင်းတော့မလား….လို့ တွေးမိလိုက်တယ် ။ သူက ဒီလိုနေရာတွေ သိထားသူမို့ နာရီပိုင်း ယူလို့ရတဲ့ ရွှေဂုန်တိုင်ဖက်က ဟိုတယ်တခုကို မောင်းလိုက်တယ် ။ ဒီဟိုတယ်က ကောင်းတာက ကးပေါ်က ဆင်းစရာ မလိုဘဲ ဟိုတယ် အခန်းတွေနားအထိ ကားကို မောင်းဝင်သွား လို့ရတာကြောင့် ကိုယ့်ကို လူမမြင်ဘူး ။
ကိုယ့်ကို အခန်းသော့ လာပေးတဲ့ ဟိုတယ်က ဝန်ထမ်း ကောင်လေး တယောက်နဲ့ဘဲ ဆက်ဆံရတယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်လည်း သဘောကျသွားတယ် ။ ဟိုတယ်ခန်းထဲကို နှစ်ယောက်သား ဝင်လိုက်ကြတာနဲ့ ကိုစိုးမိုး စိတ်တွေ လှုပ်ရှားပြီး သူ့လီးက မတ်နေပြီ ။ တောင်နေပြီ ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ ခါးသေးသေး အောက်က စွင့်ကားနေတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို ဖျတ်ကနဲ ကြည့်မိလိုက်တယ် ။ ဟူး….ကောင်းလိုက်တာ…..။ “ စိုးမိုး…” “ ဗျာ …” “ မင်း…ပဲခူးမှာ တုံးက ဘာ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတာလဲ….မင်း “ အ ”ချင်ယောင် ဆောင်နေတာလား …” “ ဗျာ….ဟို…ဟို….ဟိုဒင်း….” ပဲခူးမှာတုံးက ဘကြီးမြိုင်ရဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ ခြံထဲသွားလည်ကြတဲ့ အခါ ညဖက် မှောင်မှ ပြန်ကြတော့ ခြံဝမှာ ရပ်ထား ခဲ့တဲ့ ကားဆီကို အားလုံး ပြန်လျှောက်ကြတဲ့ အချိန် အမှောင်ထဲမှာ ကိုစိုးမိုးရဲ့ အရှေ့က လျှောက်နေတဲ့ ဒေါ်စီ စီလှိုင်က လက်လွှဲရင်း ကိုစိုးမိုးရဲ့ ပေါင်ကြားကို ထိမိသွားတယ် ။
သူ့ငပဲတန်ကို မိမိရရကြီး စမ်းမိခဲ့တာမို့ ကိုစိုး မိုး တော်တော် တုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ် ။ မတောတဆဘဲလို့ ထင်ခဲ့မိတယ် ။ အခုတော့ ဒေါ်စီစီလှိုင် ပြောပုံအရ တမင်တကာ လာထိကိုင်လိုက်တာ ဖြစ်မယ် ။ “ စိုးမိုး..ကဲ နုံချင်ယောင် ဆောင်မနေနဲ့..ကဲ…မင်း ငါ့ကို သဘောမကျဘူးလား…ပြောစမ်း…ကြည့်..ငါ့ကို…” ဒေါ်စီစီလှိုင်သည် ကိုယ်ဟန်ပြမယ် တယောက်လို သူမကိုယ်ကို လှည့်ပြလိုက်တယ် ။ “ ဟုတ်..ဟုတ်….ဟို..ဟို….” “ အရူးကွက် နင်းမနေနဲ့ စိုးမိုးရယ်..လာစမ်း….” ဒေါ်စီစီလှိုင်က ကိုစိုးမိုးရဲ့ ပလေကပ်ပုဆိုးကို ဖျတ်ကနဲ ဆွဲချွတ်ချပစ်လိုက်တယ် ။ “ အိုး…ဟား….” အတွင်းခံဘောင်းဘီ ခံမဝတ်တတ်တဲ့ ကိုစိုးမိုးရဲ့ အောက်ပိုင်း တခုလုံး ဗလာကျင်းသွားပြီး လီးတုတ်တုတ်ကြီး ငေါငေါကြီး ပေါ်သွားတယ် ။
ဒေါ်စီစီလှိုင်က လီးတန်ကြီးကို တပ်မက်စွာနဲ့ စိုက်ကြည့်နေပြီး…“ မင်း ကုတင်ပေါ် ထိုင်လိုက်စမ်း..စိုးမိုး…” လို့ အမိန့်ပေးလိုက်တယ် ။ ကိုစိုးမိုးလည်း လီးကြီး ထောင်ရက်နဲ့ ကုတင်ပေါ် ထိုင်လိုက်တော့ ဒေါ်စီစီလှိုင်လည်း ကိုစိုးမိုး ဘေးမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်း ဆတ်ကနဲ လီးကြီးကို ကိုင်ဆုပ်လိုက်တယ် ။ “ အားပါး…..မင်း လီးက တော်တော် ကြီးတာဘဲ …” လို့ သဘောကျသလို ပြောလိုက်ရင်း လီးတန်ကို ပွတ်သပ် ကြည့်နေတယ် ။ ကိုစိုးမိုး ထင်ထားသလိုဘဲ သူ ကံကောင်းပြီ ။ သူဌေးကတော်ကိုတော့ သူ ဝါးရတော့မယ် ..။ “ ငါ…ကြိုက်တယ်….မင်း တော်တော် ယောက်ျား ပီသတာဘဲ …” ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ လက်က ကိုစိုးမိုးရဲ့ ဖွားဖက်တော်ကြီးရဲ့ ထိပ်ဖျားကနေ အရင်းပိုင်း အထိ ထိတယ် ဆိုရုံလေး ပွတ်သပ်နေတယ် ။
ကိုစိုးမိုးသည် ဒီအထိအတွေ့တွေကြောင့် စိတ်တွေ ထသထက်ထလာပြီးဖွားဖက်တော်မှာ သံချောင်းကြီးတချောင်းလို မာကျောလာပြီး မတ်မတ်ကြီး ထောင်လာတော့ ဒေါ်စီစီလှိုင်က သဘောကျပြီး တဟင်းဟင်းနဲ့ ရယ်လိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ “ စိုးမိုး..မင်း ငါ့ဖင်ကြီးတွေကို ကြည့်ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ကြွကြွနေခဲ့တယ် မဟုတ်လား….ငါ သိပေမယ့် မသိချင်ယောင် ဆောင်နေခဲ့တာ….မင်း ငါ့ကို စိတ်မှန်းမှန်းပြီး ကွင်းထုတယ် မဟုတ်လား….” လို့ မေးလိုက်တော့ ကိုစိုးမိုးလည်း မငြင်းဘဲ “ ဟုတ်ပါတယ် ဒေါ်လေး….” လို့ ဖြေလိုက်တယ် ။ “ မင်း ငါ့ဖင်ကြီးတွေကို အဝတ်မပါဘဲ မြင်ဘူးလား…..” “ မ….မ…..မ….မြင်ဖူးပါဘူး….” ကိုစိုးမိုး တံတွေးကို ဂုကနဲ မြို ချလိုက်ပြီး ဖြေလိုက်တယ် ။ “ မင်း မြင်ချင်လား…..” “ ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ …..” ဒေါ်စီစီလှိုင်လည်း အရင်ဆုံး ထမိန်ကို ချွတ်ချလိုက်တယ် ။ အသား ပျော့ပျော့ ထမိန်လေးက ဟုတ်ကနဲ ကြမ်းပေါ်ကို ကွင်းလုံးပုံ ကျသွားသည် ။
ပင်တီပါးပါး အဖြူလေး ဘဲ ကျန်တဲ့ ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ ကိုယ်အောက်ပိုင်းတွေကို ကိုစိုးမိုး အငမ်းမရ ကြည့်လိုက်တယ် ။ ပေါင်ဂွဆုံနေရာက မို့ဖောင်းဖောင်း နေရာကို သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်မိတယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်က ပင်တီလေးကိုပါ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆွဲချ ချွတ်လိုက်တယ် ။ အင်္ကျီကိုလည်း ချွတ်လိုက်တယ် ။ ဘရာစီယာအောက်က နို့ကြီး နှစ်လုံးက ဘရာစီယာရဲ့ ချုပ်နှောင်ထားတာကို အတင်း ရုန်းထွက်ချင်နေကြသလိုဘဲ ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်က ဘရာစီယာ ချိတ်ကိုလည်း ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရော ဖွံ့ထွားတဲ့ နို့ကြီး တွေ ဘွားကနဲ ပေါ်လာတယ် ။ “ ဘယ်လိုလဲ….ဘာထင်သလဲ..စိုးမိုး…..” “ အရမ်းလှတာဘဲ ဒေါ်လေး…..” “ လာ..ဒို့ အချိန် သိပ်မရှိဘူးကွ..အိမ်မှာ စတယ်လာတို့ကို ထားခဲ့တာ…..” ဒေါ်စီစီလှိုင်က ကုတင်စောင်းမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး ပေါင်တန်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲကားလိုက်တယ် ..။
“ စိုးမိုး….မင်း ငါ့ကို မှုတ်ချင်လား…..” “ ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့….” “ လာ…မှုတ်လေ ….” “ ဟုတ်ကဲ့….” ကိုစိုးမိုး ပေါင်တန်ဖြူဖြူ နှစ်ချောင်းရဲ့ အလည်ခေါင်မှာ ဒူးထောက် ထိုင်ချလိုက်ပြီး မို့ဖေါင်းတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို စ နမ်းရှုံ့ပါတော့တယ် ။ အမွှေး ရိပ်ထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးက မို့အိနေသည် ။ အကွဲကြောင်းကြီးက အသား ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသူမို့ ပန်းနုရောင်လေး ။ နှုတ်ခမ်းသားထူထူတွေက ရဲနေပေမယ့် ပြဲဟနေတယ် ။ အတွင်းသားနီနီရဲရဲလေးတွေကို တပိုင်းတစ တွေ့နေရတယ် ။ ကိုစိုးမိုး အငမ်းမရ လျာနဲ့ ယက်ပြီ ။ သည် အချိန်အခါမျိုး ရပါစေ ဖြစ်ပါစေလို့ ကျိတ် ဆုတောင်းခဲ့တာ ကြာပြီ ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်ကို စိတ်နဲ့ မှန်းပြီး ကွင်းတိုက်ခဲ့ရတာလည်း အကြိမ်ပေါင်း မရေမတွက်နိုင်တော့ဘူးလေ ။ ဖင်ကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး လီးတောင်ရတာလည်း နေ့တိုင်းဘဲ ။ အခုတော့ သူ့စိတ်ကြိုက် စောက် ဖုတ် ယက်ခွင့်ကို သူ ရနေပြီ ။
ပေါင်တန်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ဖြဲပြီး ဖိယက်လိုက်တယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင် မျက်စိတွေ ပိတ်ထားပြီး ခံနေတယ် ။ “ အား…ရှီး…အင်း…အင်း……အီး… ပလပ်…….ပြတ်…ပလပ်…….ပြတ်……..။ ကိုစိုးမိုးလည်း အစိလေးကို လျာနဲ့ ထိုးကော်လိုက် စုတ်လိုက် အမျိုးမျိုး ကလိပေးနေတော့ ဒေါ်စီစီလှိုင် လည်း တအားကို အကြိုက်တွေ့နေတယ် ။ ဟိုတလောက လိုးဖြစ်လိုက်တဲ့ ထစ်ချုံး နဲ့တုံးကလိုဘဲ သဘောကျမိတယ် ..။ ဖိယက်ပေးနေတဲ့ ကိုစိုးမိုးကို “ တော်လိုက်တော့ ဒေါ်လေး မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ….” လို့ ပြောလိုက်လို့ ကိုစိုးမိုးလည်း စောက်ဖုတ်ကနေ မျက်ျွှာ ခွာလိုက်ပြီး..“ ဘာလို့လဲ.. ဒေါ်လေး..ကျနော် မှုတ်တာ မကောင်းလို့လားဟင်…” လို့ မေးလိုက်တယ် ။ “ မဟုတ်ဘူး..ဒေါ်လေး လိုချင်နေပြီ …ဒေါ်လေးကို လုပ်ပေးတော့ကွာ….” လို့ ဒေါ်စီစီလှိုင်က ဖြေတယ် ။
ကိုစိုးမိုးလည်း ချက်ချင်းဘဲ ကုန်းထပြီး ဒေါ်စီစီလှိုင် အပေါ် တက်ခွပြီး သူ့လီးကြီးကို စောက် ဖုတ်ဝမှာ တေ့ပြီး သုံးလေးခါလောက် စုန်ချီ ဆန်ချီ ပွတ်တိုက်လိုက်ပြီးမှ ဖိသွင်းလိုက်တယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်လည်း “ အိ ”လို့ အသံထွက်သွားပြီး ကိုစိုးမိုးကို လှမ်းဆွဲကိုင်လိုက်တယ် ။ ပြိကနဲ လီးကြီး ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကို တိုးဝင်သွားပြီ ။ လုံးပတ်တုတ်တဲ့ကောင်ကြီးမို့ စောက်ဖုတ် အတွင်းသား နံရံတွေကို တထစ်ထစ်နဲ့ ပွတ်ဆွဲသွားလို့ ဒေါ်စီစီလှိုင် တဖျင်းဖျင်းနဲ့ အရသာ ထူးသွားတယ် ။ ကိုစိုးမိုးက သူ တချိန်လုံး လိုးချင်နေခဲ့တဲ့ သူဌေးကတော် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆေးငါးကြီးကို လိုးခွင့်ရပြီ ဆိုတော့ အရမ်း ပျော်သွားပြီ ။ ဖိသွင်းလိုက် ပြန်ဆုတ်လိုက်နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း စလိုးပြီ ။ “ စိုးမိုး..နို့တွေကို ကိုင်လိုးစမ်းပါဟာ….” “ ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်လေး…” နို့ကြီး နှစ်လုံးကို ဆုပ်နယ်လိုက် ပါးစပ်နဲ့ စို့လိုက် လုပ်ရင်း စောက်ဖုတ်ထဲကို ဖိဖိ လိုးဆောင့်လိုက်တယ် ။
ဒေါ်စီစီလှိုင်လည်း လင်ကြီး မလိုးနိုင်လို့ တအား ဆာလောင် မွတ်သိပ်နေရတာမို့ အခုလိုတွေ ရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ ကုန်းဖြစ်သွားရတာ ။ စိုးမိုးရဲ့ လီးကိုရော စိုးမိုး လိုးတာကိုရော သူမ ကြိုက်သွား ရပြီ ။ စိုးမိုးလည်း လှေကြီးထိုး ပက်လက် အနေအထားနဲ့ အားရအောင် လိုးအပြီး ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သူ့ပုခုံးပေါ်ကို ထမ်းတင်ပြီး လိုးပြန်တယ် ။ အရှိန်က မြန်ဆန် သွက်လက်နေပြီ။ “ အား..ရှီး…….ဆောင့်…ဆောင့်…ဆောင့်ပါ စိုးမိုးရဲ့..တအားနင်း ဆောင့်လိုက်စမ်းပါ . . . ”လို့ အားမလို အားမရ တောင်းဆိုနေတဲ့ ဒေါ်စီစီလှိုင်လည်း ကိုစိုးမိုးက သူမလိုချင်တဲ့ အတိုင်း ခပ်ကြမ်း ကြမ်း ပြင်းပြင်း ဆောင့်ပေးလိုက်လို့ ကျေနပ်သွားတယ် ။
“ ကောင်းတယ်…အိုး…ကောင်းတယ်…အား…အား….အား….” ကိုစိုးမိုးလည်း ဒေါ်စီစီလှိုင် ပြီးသွားတယ် ဆိုတာကို သိလိုက်တယ် ။ သူလည်း တအား ကောင်းသထက် ကောင်းလာလို့ ဒေါ်စီစီလှိုင်လည်း ပြီးသွားရော သုတ်ရည်တွေ ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ စောက်ဖုတ် အ တွင်းထဲကို ပန်းထုတ်လိုက်ရင်း ပြီးလိုက်တယ် ။ ဘကြီးခိုင်တို့ မိသားစုကို အိမ်မှာ ထားခဲ့ရလို့ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါဘဲ လို့ ဒေါ်စီစီလှိုင်က ကိုစိုးမိုးကို ပြောလိုက်တယ် ။ ကိုစိုးမိုးက တကယ်တော့ နောက်ထပ် ထပ် လိုးချင်နေသေးတာ ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်က “ စိုးမိုး နင် အခုလို နင်နဲ့ ငါနဲ့ ဖြစ်ကြတာကို ဘယ်သူ့ကိုမှ လျှောက် မဖွနဲ့နော်..” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အခါ “ ဟာ..စိတ်ချစမ်းပါဗျာ..ကျနော် ဘာလို့ ပြောရမှာလဲ … ဘယ်သူမှ မသိစေရဘူး..ဒေါ်လေး…” လို့ ပြန်ပြောလေသည် ။ ကိုစိုးမိုး အတွက်က အိပ်မက် လိုဘဲ ဖြစ်နေတယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်ကို စိတ်ကြိုက် လိုးခွင့်ရသွားတာ တအား ကျေနပ်သွားတယ် ။
အိမ်ကို ပြန်ရောက်ခါနီး..ဒေါ်စီစီလှိုင်က “ ဧည့်သည်တွေ ပြန်သွားပြီးတဲ့ အခါ မင်းနဲ့ ဒေါ်လေးနဲ့ ထပ်သွားကြသေးတာပေါ့ အဲ့ ဟိုတယ်ကို…” လို့ ပြောတယ် ။ ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ ကိုယ်လုံးတီး ကိုယ်တွေကို မျက်လုံးထဲမှာ ပြန်မြင်ယောင်မိရင်း ကိုစိုးမိုး စိတ်တွေ ထကြွလာမိရပြန်တယ် ။ ဒါကြောင့် “ ဒေါ်လေး…..ကျနော်..ထပ်လုပ်ချင်သေးတယ်ဗျာ . .ကျနော့် လီး ပြန်တောင်လာပြီ..” လို့ ပြောလိုက်တော့ ဒေါ်စီစီလှိုင်က “ အချိန် မရှိတော့ဘူးကွယ်…..နောက်များမှာဘဲ…..” လို့ ပြော လိုက်တယ် ။ ကိုစိုးမိုးက “ ဒေါ်လေး…တအား စွဲတယ်ဗျာ..ဒေါ်လေး..ကျနော့်ကို အဆင်ပြေတဲ့အချိန် ထပ် တွေ့ခွင့်ပေးပါအုံး….” လို့ ပြောရင်း ဒေါ်စီစီလှိုင်ရဲ့ ပေါင်တန်တဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ် လိုက်တယ် ။ “ ဟိတ်..အိမ်ရောက်ခါနီးပြီ…..နောက်မှကွာ…နော်…နော်..” ကိုစိုးမိုးက သက်ပြင်းချရင်း ကားကို ခြံထဲကို ထိုးကွေ့ ဝင်လိုက်ပါတယ်………… ပြီး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ကောငျးစခေငျြလို့ပါ